လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ.။
မြန်မာနှစ်သစ် အချိန်မှာ လူသားအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာမှုများရကြပါစေ။ မေတ္တာသုတ်များကိုရွတ်ဆိုပွားများနိုင်ကြပါစေရှင်.။ မြန်မာပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်များကင်းဝေး ကြပါစေလို့ နှစ်သစ်မှာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, April 17, 2010 Links to this post
တိုက်အို၊တိုက်ဆွေး ပြိုကျတွင် ပိတ်မိနေသူ သမီးငယ်အား ကယ်ဆယ်ရင်း အသက်စွန့်သွားရတဲ့ 'မီးသတ်ဦးမင်းနောင်'
ရန်ကုန်မြို့၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် (၆)ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၃ဝ)နှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့် အမှတ်(၆၂၈/၆၃၂)ရှိ၊ တိုက်ဟောင်း တိုက်ဆွေးသည် (၁၄၊၃၊၂ဝ၁ဝ) ညနေ (၄)နာရီက ပြိုကျပြီး သမီးငယ် မမျိုးပပဇော် (၁၅)နှစ် အဆောက်အဦး ပြိုကျရာတွင် ပိတ်မိ သေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ မီးသတ်(၁၂)ဦး၊ ကြက်ခြေနီ(၁)ဦး၊ အရပ်သား(၁)ဦးတို့ အသီးသီး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၇၇)တွင် ဖေါ်ပြပါရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားစဉ် ညနေ (၄)နာရီခွဲက တိုက်ခန်းရှင် ဦးမောင်မောင်၏ သမီးငယ်မမျိုးပပဇော်
(၁၅)နှစ်က သမီးကို ကယ်ကြပါ-ကယ်ကြပါဟု နှစ်ကြိမ် လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် သူမ၏ဖခင်ထံ ဆက်သွယ်ပြီး
ဖုန်းသံပျောက်သွားသည်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှသိရှိကြရစဉ်ဦးမင်းနောင်(၅၆)နှစ်ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ အရန်မီးသတ်၊ ဒုတိယတပ်ခွဲမှူးက အခြားမီးသတ်များ၊ ကြက်ခြေနီများနှင့် အတူ အင်္ဂတေအုတ်ပုံ
ကြားထဲသို့ ဝင်ရောက် သက်စွန့်ဆံဖျား၊ ကယ်ဆယ်နေစဉ် မမျှော်လင့်ပဲ ည(၇)နာရီမိနစ်(၄ဝ)အချိန်က
နေ့လယ်(၁၁)နာရီခွဲအချိန်က ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ၊ကျောက်တံတား
ဒေါ်အေးအေးမြင့်၏ခင်ပွန်း မခင်မိုးမြင့်၊မောင်မင်းသူ၊ မမေသူဟိန်း တို့၏ဖခင်ဦးမင်းနောင်
ရန်ကုန်မြို့နယ်ပေါင်းစုံမှ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများ နှစ်ဆန်း နှစ်ရက်နေ့မှစ၍ ကျောင်းအပ် လက်ခံမည်
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ အခြေခံပညာအဆင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများကို ၂၀၁၀-၁၁ပညာသင်နှစ်မှစ၍ စတင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီဖြစ်ရာ အဆိုပါ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွင် အပ်နှံလိုသူများသည် ဧပြီလ ၁၈ ရက် (နှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေ့) မှစ၍ ကျောင်းအပ် လက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် ရှိ ပုဂ္ဂလိကပညာရေး ကျောင်းများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“မူလတန်းကနေစပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအထိ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား ဘော်ဒါကို နှစ်ဆန်း နှစ်ရက်နေ့ကစပြီး သတ်မှတ်လူဦးရေ မပြည့်မချင်း လက်ခံသွားပါမယ်။ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းက ကျောင်းထွက် လက်မှတ်ယူလာရမယ်” ဟု မဟာမြကျွန်းသာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
မဟာမြကျွန်းသာတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာသင်နှစ် တစ်နှစ်အတွက် ကျောင်း လခနှင့် နေထိုင် စားသောက်စရိတ် ကျပ်နှစ်ဆယ့်ခုနစ်သိန်းငါးထောင် သတ်မှတ်ထားပြီး Grade I မှ Grade X ကို တစ်နှစ်အတွက် ကျပ် ၂၆သိန်း သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ နှစ်ကြိမ်ခွဲ သွင်းနိုင်ကြောင်း၊ Grade တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျောင်းသားဦးရေ ၅၀ ဝန်းကျင်သာ လက်ခံမည် ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ အခြားပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သော ပညာနန်းတော်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက“ နှစ်ဆန်း နှစ်ရက် နေ့ကစပြီး ကျောင်းအပ်လက်ခံမှာပါ။ ပညာသင်စရိတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာတော့ မသတ်မှတ်ရသေးဘူး။
ပုဂ္ဂလိက စာသင်ကျောင်း ဥပဒေက မကြာခင် ထွက်တော့မှာဆိုတော့ အဲဒီကျမှ ပညာသင်စရိတ်ကို သတ်မှတ်သွားမယ်” ဟုရှင်းပြသည်။ ပညာနန်းတော်သည် ဘော်ဒါနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်း နှစ်ခုစလုံး လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံဖြင့်သာ ကျောင်းတက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ Success ကျောင်း မှာ နှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံမည် ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသားများကို တစ်လကျပ်ငါးသောင်းနှုန်း သတ်မှတ် ထားကြောင်း ယင်းကျောင်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
အဝေးပြေးမော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင် အစားအစာထဲ အိပ်ဆေးထည့်ကျွေးပြီး ပစ္စည်းများ ခိုးယူမှု ဖြစ်ပွား
မော်လမြိုင်မှ ရန်ကုန်သို့ ပြေးဆွဲသည့် . . . အဝေးပြေး ခရီးသည်ယာဉ်ပေါ်တွင် အစားအစာထဲ အိပ်ဆေးထည့်ကျွေးပြီး တန်ဖိုးကျပ် ၁၆ သိန်းခွဲရှိ ရွှေ ငွေပစ္စည်းများ ခိုးယူမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၅ ရက်နေ့ တွင် မော်လမြိုင်ကွက်သစ် ရပ်ကွက်နေ ရွှေပန်းတိမ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ကိုကျော်ကျော်ဦး (၃၀ နှစ်) သည် မော်လမြိုင်မှ ရန်ကုန်သို့ လာမည့် . . . ကား ခုံအမှတ် ၁၅ ဖြင့် လိုက်ပါခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအချိန်တွင် ဘေးချင်းကပ်ခုံ၌ စီးနင်းလိုက်ပါလာသူ အရပ်ပု၊ ဗိုက်အနည်းငယ်ရွှဲ၊ အသားလတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ဝ၊ ပုဆိုးဝတ်ထားပြီး (လူမြင်လျှင် မှတ်မိနိုင်သော) အသက် ၄၀ ခန့် ရှိသူနှင့် ရင်းနှီးကာ ၄င်းထံပါသော ပေါင်မုန့်တစ်ခုကို ကားပေါ်တွင်ကျွေးသဖြင့် စားခဲ့မိကြောင်း၊ ဘီးလင်းမြို့နယ် ကားရပ်နားသည့် နေရာအရောက်တွင် ကားခေတ္တ ရပ်နားစဉ် လက်ဖက်ရည် အတူသောက်ပြီး ပြန်လည် လိုက်ပါလာကာ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၄ ရပ်ကွက် ပါရမီ ကားဂိတ်ဝင်း အတွင်းရှိ . . . ကားဂိတ်သို့ မနက် ၅ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ရောက်ရှိပြီး၊ ယာဉ်မောင်း နှင့် ယာဉ်အကူတို့က နှိုးရာ သတိကောင်းစွာမရရှိသဖြင့် သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံသို့ အတွင်းလူနာအနေဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ အိပ်ပျော်သွားစဉ်တွင် ကိုကျော်ကျော်ဦး ၏ ခရီးဆောင်အိတ်အတွင်း မှ ငွေကျပ် ၁၆၀ဝ၀ဝ၊ ရွှေချိန် ၂ ကျပ် ၃ ပဲသားခန့် ရှိ အမ်စီရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံး၊ ၃ မတ်သားရှိရွှေလက်စွပ် တစ်ကွင်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ကျပ် ၁၆၅၅၀ဝ၀ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို သိရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါအမှုကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ပ/၂၀၈/၁၀ ပုဒ်မ ၃၂၈ ဖြင့် တရားခံ (စုံစမ်းဆဲ) အား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့တွင်မန္တလေးသင်္ကြန်အတက်နေ့ နံနက်ခင်းက မိုးသက်လေပြင်းငယ်တစ်ခု တိုက်ခတ်ခဲ့သောကြောင့် မဏ္ဍပ်အချို့ ပြိုလဲခဲ့
မန္တလေးမြို့တွင် ဧပြီလ ၁၆ရက်၊ သင်္ကြန်အတက်နေ့၊ နံနက် ၆နာရီကျော်ခန့်က လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျင် ၁၂မိုင်ခန့်ရှိသော မိုးသက်လေပြင်းငယ်တစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ လေပြင်းတိုက်ခတ်ချိန် ၁၅မိနစ်ခန့် မိုးရွာသွန်းချိန် မိနစ်၃၀ခန့်ကြာမြင့်သော အဆိုပါလေပြင်း ကျရောက်မှုကြောင့် သစ်ပင်အချို့နှင့် ကျုံးအရှေ့ဘက်ရှိရေကစားမဏ္ဍပ်အချို့ ပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်မှုကို မျက်မြင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသော ရေကစားမဏ္ဍပ်တစ်ခုမှ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်နေသူတစ်ဦးကလည်း ''ဝေလီဝေလင်းအချိန်လောက်မှာ လေနဲ့မိုးတွဲလာတာမို့ မဏ္ဍပ်မှာစောင့်အိပ်တဲ့သူတွေကို လိုက်နှိုးနေရင်း လေကတဖြည်းဖြည်းပြင်းလာတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလည်း မှောင်ကျသွားတာ ဘာမှကိုမမြင်ရတော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မဏ္ဍပ်ကလည်း ပြိုကျသွားပြီး အနီးအနားက သစ်ပင်တွေလည်း လဲသွားတယ်။ မဏ္ဍပ်ကပြိုလဲသွားတာမို့ မိုးလေငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာ တီးဝိုင်းပစ္စည်းတွေကို ဆွဲထုတ်ပြီးသိမ်းဆည်းလိုက်ရတယ်''ဟု ဆိုပါသည်။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျုံးအရှေ့လမ်းပေါ်ရှိ မဏ္ဍပ် ၆ခုခန့်ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့သော်လည်း အချို့မဏ္ဍပ်များမှာ အချိန်မီပြုပြင်ကာ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို အရှိန်မပျက် ဆင်နွှဲပျော်ရွှင်ခဲ့ကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
သတင်းရင်းမြစ်...Eleven Media Group.
ယနေ့ ရန်ကုန်ရေဝေးသုသာန် ၌(၁၉) လောင်းပြိုင်အသုဘကိုမီးသဂြိုလ်ပြီးစီးပါကြောင်း
ရန်ကုန်ုမြို့တော်တွင် ယခုနှစ်လို အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးစေသော သင်္ကြန်ကို ယခုနှစ်၌ သာတွေ့မြင်ခဲ့
ရပါသည်.။ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ကြောင့် အသက်သေးဆုံးခဲ့ကြသော ယောင်္ကျားမိန်းမ လူကြီးလူငယ် များ
ယနေ့တွင် မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအတာ သင်္ကြန်သည်လည်းပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်.။မြန်မာနှစ်သစ်တွင်
မကောင်းဆိုးဝါး အာဏာရူး များ၏ရက်စက်တဲ့ လုပ်ရပ် များကတော့ အန်မခန်းအောင်ပါဘဲ.။
ယခုလဲ ပြည်သူလူထုများအား မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်ပါအုံးမည်.။
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအတွက် မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် အလွန်ကြေကွဲမှုများနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ပါမည်.။
နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသော
ပြည်သူများ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘ၀သို့ ရောက်ရှိကြပါစေ။ ဤကဲ့သို့ကြေကွဲဖွယ်
ဖြစ်ရပ်ဆိုးများ မည်သည့်ဘ၀တစ်လျှောက်တွင်မှ ထပ်မံ မကြုံတွေ့မခံစားကြရပါစေလို့
သွေးနီစွန်းသော သင်္ကြန်နေ့(၂၀၁၀) အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ ပေးကြပါရန် မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းအား အလေးအနက် နူးညွှတ်စွာ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့(ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ ) တွင် ရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း ကျင်းပသော နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ရေပက်လောင်းကာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြသော ပြည်သူအပေါင်းတို့သွေးမြေကျခဲ့ရသည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာသမိုင်းကြောင်းအား အကျဉ်းတန်စေခဲ့ရုံသာမက အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများအတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်နေ့ တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့ ၏ အသက်သွေးဆုံးရှုံးစေခဲ့သော ဤနေ့ အား မြန်မာရိုးရာသင်္ကြန် အစဉ်အလာသမိုင်းတွင် သွေးနီစွန်းသော သင်္ကြန်နေ့(၂၀၁၀) အဖြစ် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အောက်မေ့ဖွယ် ဖြစ်စေရန် မှတ်တမ်းထားအပ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်ကျရောက်မည့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မှ စ၍ (၃) ရက်တိုင်တိုင် ဘုရားကျောင်းကန်စေတီပုထိုးများတွင်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာဘာသာများအလိုက် ဆုတောင်းမှုပြုရာ နေရာဌာနများတွင်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့နေအိမ်များတွင်လည်းကောင်း မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ မှ အပြစ်မဲ့စွာ သေဆုံးသွားကြရသူများနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအတွက် မေတ္တ၁ပို့ ဆုတောင်းပေးကြပါရန် အလေးအနက် နူးညွတ်စွာ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။ မိမိတို့ မိသားစုများ ဆွေမျိုးသင်္ဂဟများ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ နီးစပ်ရာ သိကွမ်းသူများအား ယခုဆုတောင်းမှုအား စုပေါင်း ပြုလုပ်ပေးကြပါရန်ကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်း အသိပေး မေတ္တာရပ်ခံပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
- ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့(ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ ) တွင် ရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း ကျင်းပသော နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသော ပြည်သူများ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘ၀သို့ ရောက်ရှိကြပါစေ။ ဤကဲ့သို့ကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်ဆိုးများ မည်သည့်ဘ၀တစ်လျှောက်တွင်မှ ထပ်မံ မကြုံတွေ့မခံစားကြရပါစေသား။
- ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့(ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ ) တွင် ရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း ကျင်းပသော နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများ အသက်ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ ဤကဲ့သို့ကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်ဆိုးများ မည်သည့် အချိန်အခါတွင်မှ ထပ်မံ မကြုံတွေ့မခံစားကြရပါစေသား။
- မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ဘေးအန္တရာယ်အသွယ်သွယ်မှ အစဉ်အမြဲ ကင်းဝေးကြပါစေသား။
အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသောသူများ၏ မိသားစုများနှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မျှ အထူးကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါကြောင်း လေးနက်စွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူများ၏ရုပ်အလောင်းများကို သင်္ဂြိုလ်နိုင်ရန်အတွက်ဧပြီလ ၁၆ ရက်နံနက်၈နာရီမှစ၍ဆေးရုံကြီးရေခဲတိုက်မှတစ်ဆင့်ရေဝေးသုဿာန်သိုပို့ဆောင်
ဧပြီလ ၁၅ ရက် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်းရှိ X2O မဏ္ဍပ်အရှေ့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် သေဆုံးသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများကို သင်္ဂြိုလ်နိုင်ရန်အတွက် ဧပြီလ ၁၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီမှစ၍ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ရေခဲတိုက်မှတစ်ဆင့် ရေဝေးသုဿာန်သို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
''အဲဒီနေ့က ကျွန်မတို့ အိမ်ရှေ့မှာ သာကူကျိုတယ်၊ မုန့်လုံးရေပေါ်လုံးပြီး အလှူဒါနလုပ်တယ်။ ၂နာရီခွဲလောက်မှာ အလှူကပြီးတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသားက သူ့ဦးလေးရယ်၊ တူရယ် စုစုပေါင်း သုံးယောက်က စတိတ်ရှိုးသွားကြည့်မယ်ဆိုပြီး ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းကိုသွားတယ်။ လေးနာရီလောက်မှာ အိမ်ကို ဦးလေးနဲ့ တူရယ်ပဲ ပြန်ရောက်လာတယ်။ ကျွန်မရဲ့အမျိုးသားကပါမလာတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့က ချက်ချင်း ဆေးရုံတွေမှာ လိုက်ရှာတယ်။ သင်္ကြန်အတက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ရေခဲတိုက်ကိုသွားရှာတော့ တွေ့ရတယ်။ သူဆုံးသွားတော့ ကျွန်မနဲ့အတူအသက် ၁၀နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ပဲ ရှိတော့တယ်''ဟု ဗဟန်းမြို့နယ် ကြားတောရလမ်းရှိ သေဆုံးသူ၏ အမျိုးသမီးက ပြောပါသည်။ အဆိုပါ သေဆုံးသူအမျိုးသားမှာ အသက် ၃၅ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ထို့အပြင် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ X2O မဏ္ဍပ်အရှေ့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရှိ အခန်း ၅-၆၊ ၃-၄၊ ၁၅-၁၆၊ ၁၃-၁၄၊ ၉-၁၀ တို့၌ ကုသပေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ဒဏ်ရာရသူများ၏ မိသားစုဝင်များအနက် တစ်ဦးစီကို ၀င်ရောက်ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
''ကျွန်မရဲ့သားက မနေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျောက်လည်ကြတယ်။ အပြန်မှာ သူပါမလာဘူး။ ပျောက်နေတဲ့အတွက် ဆေးရုံကြီးကို လာကြည့်တာပါ။ ဒဏ်ရာရလူစာရင်းတွေကိုကပ်ထားပြီး၊ လူနာတစ်ယောက်ကို တစ်ဦးသာဝင်ကြည့်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ သားကို ဆေးရုံကြီးရဲ့ အခန်း ၅-၆မှာ တွေ့ပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာ ယောက်ျားလေးက ၄၇ယောက်၊ မိန်းကလေးက ၁၆ ယောက် ရှိတယ်လို့ စာရင်းကပ်ထားတာကို တွေ့ရတယ်''ဟု ဒဏ်ရာရရှိသူတစ်ဦး၏ မိခင်က ပြန်လည်ပြောကြားပါသည်။
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့သော x2o ရေကစားမဏ္ဍပ် အပါအဝင် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း
သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့တွင် ရေပြန်ကစားနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် အဆိုပါ မဏ္ဍပ်များတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု မဖြစ်ပွားမီသင်္ကြန်ရက်များကကဲ့သို့ ရေကစားသူများပြားမှုမရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် အချို့မဏ္ဍပ်များမှာမူ လုံးဝပိတ်သိမ်းထားပြီး ရေကစားခြင်းမပြုတော့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
''ကျွန်တော်က X2O မဏ္ဍပ်မှာ ရက်အားလုံးရေကစားဖို့လက်မှတ်ဝယ်ထားတာပါ။ မနေ့က ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဒီနေ့ရေကစားမဏ္ဍပ်ဖွင့်မဖွင့် မသေချာသလို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်မှတစ်ခါ ပျော်ရတဲ့ သင်္ကြန်ဆိုတော့လဲ ပျော်ချင်ပါးချင်တဲ့စိတ်က ရှိသေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ထက်တော့ အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာ။ အခု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မဏ္ဍပ်မှာ မထိုင်တော့ဘဲ လျောက်လည်ဖို့ထွက်လာရင်းနဲ့ မဏ္ဍပ်ပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုတာကြားလို့ လာကြည့်တာပါ''ဟု X2O ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင် All Days လက်မှတ်ဝယ်ထားသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
''ကျွန်တော်တို့ထင်တာက ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ မဏ္ဍပ်အားလုံးနီးပါး ရေကစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ထားတာ။ ဒီဘက်ရောက်တော့ မဏ္ဍပ်တွေ တချို့ဖွင့်နေတယ်ပြောလို့ ၀င်ကြည့်တာပါ။ မဏ္ဍပ် နှစ်ခု၊ သုံးခုလောက်ကတော့ ရေကစားတာရပ်ပြီး စက်တွေသိမ်းနေတာတွေ့ရတယ်။ ဖွင့်တဲ့ တချို့မဏ္ဍပ်တွေကျတော့လဲ ရေကစားတဲ့သူ မပြောပလောက်တဲ့ အရေအတွက်ပဲရှိတာတွေ့ရတယ်။ ဒီလမ်းထဲရေပက်ခံလာတဲ့ ကားလဲ သိသိသာသာကို မရှိသလောက်နည်းသွားတယ်''ဟု သင်္ကြန်အတက်နေ့(ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့) ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းအတွင်း ၀င်ရောက်လည်ပတ်သူတစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့သည်။
ယခုနှစ်သင်္ကြန်ကာလတွင် ယခင်နှစ်များကကဲ့သို့ အင်းယားလမ်းအတွင်း မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတွင် မဏ္ဍပ်အကြီးဆောက်လုပ်ခွင့် ၄၆ ခု ခွင့်ပြုခဲ့ရာတွင် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းတွင် ရေကစားမဏ္ဍပ် အကြီး ၁၆ ခုဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းအတွင်းရှိ မဏ္ဍပ်အကြီးများမှာ ပေ ၆၀ နှင့် ပေ ၁၀၀ ကြားရှိသော ရေကစားမဏ္ဍပ်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ပြည်လမ်းနှင့် မြို့တွင်းဧရိယာများရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ်များတွင် ပုံမှန်အတိုင်း ရေကစားနေကြသော်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းမကြီးများပေါ်တွင်မူ ရေပက်ခံထွက်သည့်ကားများ သိသိသာသာ နည်းပါးသွားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, April 16, 2010 Links to this post
သင်္ကြန်တွင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရှာမည့်သူများ ဒုက္ခတွေရပြန်ပြီ.
မြန်မာတို့၏ နှစ်သစ်ကူးကာလ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို မည်ကဲ့သို့ ဖြတ်သန်းမည်ဆိုသည့် စိတ်ကူးနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းတွင် ရှိနေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အချို့က တရားစခန်းဝင်မည်၊ အချို့ကအိမ်တွင် အေးအေးဆေးဆေး အနားယူမည်၊ ရေပက်ခံထွက်မည်၊ မဏ္ဍပ်ထိုင်မည်၊ ခရီးသွားကြမည် စသည် စသည်ဖြင့် အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးအလိုက် ပြင်ဆင်မှုအမျိုးမျိုး ရှိနေကြမည်သာဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်တွင်း ကာလပျော်ရန် အားခဲသူတွေ၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားမည့်သူတွေ စသည်နှင့် ကွဲပြားစွာပင် တစ်နှစ်တာကာလ အတွက် အပိုငွေများများဖြင့် အမြတ်ကျန်နိုင်မည့်အရေး မျော်တွေးကာ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပင်ပန်းမှုတို့ပေါင်းစပ် ပြင်ဆင်နေကြသူတွေလည်း တစ်ပုံ တစ်ပင်ဖြစ်သည်။
သင်္ကြန်တွင်းကာလ ဈေးရောင်းကြရာတွင် စားသောက်ကုန် ရောင်းချမည့်သူများမှာ အများဆုံးဖြစ်ပြီး သင်္ကြန်မတိုင်မီကာလကတည်း က မိမိတို့ရောင်းချမည့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ကုန်ကြမ်းစုဆောင်းခြင်း၊ နေရာရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
'' ကျွန်တော်တို့က သင်္ကြန်ဆိုရင် နှစ်တိုင်းဈေးရောင်းနေကျပါ။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေထက် အဲဒီအချိန် မှာ ရောင်းရတာ ပိုပြီးအမြတ်ကျန် တယ်။ လူပိုပြီး ပင်ပန်းပေမယ့် ရက်ပိုင်းအတွင်း အမြတ်များများကျန်တာကို ပိုပြီးအားထားနေရတော့ ဒီလိုဈေးရောင်းခွင့်ရတဲ့ သင်္ကြန်ရောက်တာကိုပဲ ပျော်နေရတာပါ''ဟု မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှ သင်္ကြန်တွင်းဈေးရောင်းရန် ပြင်ဆင်နေသူတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
သင်္ကြန်တွင်း ဈေးရောင်းကြသူ များတွင် ဈေးရောင်းခြင်းကို ပုံမှန် လုပ်ကိုင်နေကြသူများအပြင် သင်္ကြန်ကာလအတွင်းသာ ဈေးရောင်းခြင်းကို တစ်ပွဲတိုးလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြ သူများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
သင်္ကြန်တွင်းမှာ သူများတွေလို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် မပျော်ရပေမယ့် သူများတွေပျော်တာ ကြည့်ရင်း ကိုယ်ရမယ့်အမြတ်လေး တွက်ရင်း ပျော်ရတာပဲ။ ကလေးတွေ ဆိုရင်လည်း ဈေးရောင်းရင်း မဏ္ဍပ်တွေလျောက်ကြည့်ရတယ်လေ
''ကျွန်တော်တို့က တခြားအချိန်တွေမှာဆို ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရေလိုက် ဖြည့်တယ်။ တခြားအလုပ်တွေမှာ လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်္ကြန် ရောက်ရင်တော့ တစ်အိမ်သားလုံး စုပေါင်းပြီး ဈေးရောင်းဖို့ကိုပဲ အားခဲရတယ်။ ဒါက တစ်နှစ်မှ တစ်ခါဆို သလို ရတဲ့ငွေကလည်း ကျွန်တော်တို့အတွက် အပိုငွေအဖြစ် များများကျန်တယ်လေ''ဟု ဒဂုံမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
သင်္ကြန်တွင်းကာလ ဈေးရောင်းရန် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ကြရာတွင် ငွေကြေးအရင်းအနှီးကို အဓိကပြင်ဆင်ကြရကြောင်း သိရသည်။
ဈေးရောင်းခြင်းကို ပုံမှန်လုပ်ကိုင်နေသူများ အနေဖြင့် သင်္ကြန်တွင်းကာလ အရင်းအနှီးမှာ လိုအပ် ချက်နည်းသော်လည်း သင်္ကြန်ကာလအတွင်း၌သာ တစ်ပွဲတိုးဈေးရောင်းကြသည့်သူများအတွက်မူ အဓိက ပြင်ဆင်ရကြောင်း သိရသည်။
'' ပုံမှန်ဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေ အဖို့ကတော့ သင်္ကြန်တွင်းဈေးရောင်း ဖို့ ပစ္စည်းတွေလည်းရှိပြီးသား အရင်းအနှီးကလည်း လည်ပတ်နေတာဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးလိုတာကချေး ငှားလိုက်ရုံပဲ။ ကျွန်တော်တို့လို တစ်ပွဲတိုးဈေးရောင်းမယ့်သူတွေကတော့ အရင်းအနှီးရဖို့က တော်တော်ကြိုးစား ရတယ်။ တချို့က အရင်လတွေကတည်းက ပိုက်ဆံကြိုစုတာမျိုးလုပ်နိုင်ပေမယ့် မစုနိုင်တာမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ငွေတတ်နိုင်တဲ့သူတချို့က အရင်းအနှီးထုတ်ပေးပြီး အမြတ်ထက်ဝက်စီ ယူတာမျိုး လည်းရှိတယ်။ ကိုယ့်ငွေနဲ့ ရင်းတာလောက်မမြတ်ပေမယ့် သင်္ကြန်တွင်း ငွေရရင်ကို လုပ်ကြရမှာပဲလေ''ဟု ဗဟန်းမြို့နယ်မှ သင်္ကြန်တွင်း ဈေးရောင်းရန် ပြင်ဆင်နေသူတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
သင်္ကြန်တွင်းကာလ ဈေးရောင်းကြရတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လှည့်လည်ရောင်းချသူများအပြင် စားသောက်ဆိုင်အချို့မှာလည်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခြင်း၊ လူစည်ကားရာ အနားယူသည့်နေရာများတွင် နာမည်ရစားသောက်ဆိုင်အချို့မှ လာရောက်ရောင်းချခြင်းနှင့် မူလလမ်းဘေးဈေး ရောင်းသူများကလည်း အဆင်ပြေရာနေရာများတွင် ဆိုင်ဖွင့်ကာ ရောင်းချကြသည်။
''ဈေးရောင်းတဲ့သူကတော့ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့လို တစ်ပွဲတိုးရောင်းရတဲ့သူတွေကတော့ လှည့်ရောင်းကြရတာများတယ်။ အရင်နှစ် တွေကတော့ အင်းလျားလမ်းဘက်ရောက်ရင် ဈေးရောင်းကောင်းတာ သေချာနေပြီ။ စည်နိုင်တဲ့နေရာတွေ ကို မိသားစုတွေလူခွဲပြီး ရောင်းဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်''ဟု မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ သင်္ကြန်တွင်း ဈေးရောင်းရန် ပြင်ဆင်နေသူတစ်ဦး က ဆိုပါသည်။
သင်္ကြန်ကာလကို အချို့က ကုသိုလ်ရေးဖြင့် အေးဆေးစွာ ဖြတ်သန်းကြသည်။ ငွေကြေးအကုန်ကျခံပြီး ပျော်ရွှင်မှုရှာကာ ဖြတ်သန်းကြသူ တွေများကဲ့သို့ ငွေကြေးရှာဖွေခြင်း ဖြင့် သင်္ကြန်ကာလကို ဖြတ်သန်းကြ သူတွေကလည်း ''သင်္ကြန်တွင်းမှာ သူများတွေလို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် မပျော်ရပေမယ့် သူများတွေပျော်တာ ကြည့်ရင်း ကိုယ်ရမယ့်အမြတ်လေး တွက်ရင်း ပျော်ရတာပဲ။ ကလေးတွေ ဆိုရင်လည်း ဈေးရောင်းရင်း မဏ္ဍပ်တွေလျောက်ကြည့်ရတယ်လေ။ ကိုယ့် ဘာသာဆို သူတို့ကိုတကူးတက လိုက်မပြနိုင်ဘဲကိုး''ဟု ဆိုကြသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာတို့၏ ရင်တွင်းမှ မတူညီသော ခံစားမျော်လင့်မှုများကို သင်္ကြန်ပွဲတော်က တစ်နှစ်တစ်ခါ မှန်မှန်သယ်ဆောင်လာမြဲပင်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် လားရှိုးမြို့ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် စည်ကားစွာကျင်းပမည်
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့တွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို စည်ကားစွာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုးမြို့ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ညနေတွင် ရန်တိုင်းအောင်မြို့ဦးစေတီတော် အနီးရှိ ဗဟိုမဏ္ဍပ်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ယိမ်းအကအဖွဲ့ ၁၉ဖွဲ့မှ ယိမ်းအကများဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုးမြို့၊ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ရေကစားမဏ္ဍပ်ကြီးပေါင်း ၂၀ ကျော် ပါဝင်ရေကစားကြမည်ဖြစ်ပြီး မဏ္ဍာပ်များအား မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနှင့် ဘူတာလမ်း၊ လေယာဉ်ကွင်းလမ်း တို့တွင် ဆောက်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုးမြို့၊ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ၊ အဆိုတော်များ လာရောက်ဖျော်ဖြေလေ့ရှိကြရာ ယခုနှစ်တွင် အကယ်ဒမီနေအောင်၊ ဘိုဘိုဟန်၊ ကံ့ကော်တောမျိုးအောင်၊ ဗစ်တာခင်ညို၊ ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင်၊ မျိုးမြင့်လေး၊ ဂျေညီညီ၊ ထွန်းထွန်း (Example)၊ သြရသ၊ မေခလာ၊ ရတနာ၊ ဆုရွှန်းလဲ့၊ လင်းဇာနည်ဇော်၊ ဂျေညီမလေး၊ ချစ်စနိုးဦး၊ ဖူးစုံ၊ နီနီခင်ဇော်၊ မို့မို့လွင်၊ စိမ့်နေခြည်၊ သီရိ(Cartoon)၊ ဂူးဂူး ၊ BlueBerry အဖွဲ့၊ တွင်ကယ်လ်နှင့်Dancer အဖွဲ့တို့ လာရောက်ဖျော်ဖြေကြမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှ နာမည်ကျော်တီးဝိုင်း Aurora တေးဂီတအဖွဲ့မှလည်း ဘဏ္ဍာအခွန်မဏ္ဍာပ်တွင် ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လားရှိုးမြို့ မဟာသင်္ကြန် ကျင်းပရေးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာပြည်သူတွေကိုမမှန်သတင်းလွှင့်ပေးနေတဲ့ နအဖ စစ်အစိုးရပိုင်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MRTV ကကြေငြာသွားတဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု.(ရုပ်သံ.သတင်း)
အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းတွေတော့ မျက်ခုံးလှုပ်ပေတော့ လာတော့မည်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးကို နအဖအာဏာပိုင်အာဏာရူးတွေ ပြောပါတော့မယ်.။အသေချာဆုံးအဖြေကတော့ သူတို့စနက် ဆိုတာကို လုံးဝမပြောတော့ဘဲ အတိုက်ခံ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့စည်း တွေကဆိုပြီ ပြည်သူတွေကို မတရားလိုက်
ဖမ်းပါတော့မယ်။ မတရားထွက်ဆိုခိုင်းပါတော့မယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ ဒီသတင်း
မကြာမှီ လာမည် မျှော်ကြပေတော့ ပြည်သူအပေါင်းတို့...။
ယနေ့နေ့လည်တွင် ကန်တော်ကြီးကန်ပါတ်လမ်း ရေကစားမဏ္ဍပ် တစ်ခုတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား သည့်မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ
အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ရေကစားမဏ္ဍပ် တစ်ခုဖြစ်သောX2o မဏ္ဍပ်မြင်ကွင်းပုံရိပ်
ယနေ့သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ နေလည် ၃နာရီ ၁၀မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ကန်တော်ကြီးဥယာဉ်ကန်ပါတ်လမ်း ရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ် တစ်ခုဖြစ်သောX2o မဏ္ဍပ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲပါသည်.။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သေဆုံးသူ (ရ)ဦးခန့်သိရပြီ၊ဒဏ်ရာရသူများကတော့ တော်တော်များကြောင်းသိ
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ရှေ့မှာ အိမ်ပြန်မရောက်သေးသော သားသမီးများအား စိတ်ပူနေသော
မိဘများ ဒဏ်ရာရထားသော လူနာများ၏ လူနာရှင်များ ပြည့်နှက်နေပြီး အတွင်းကို လူနာရှင် အနည်း
ငယ်သာ ပေးဝင်ပါတယ်။ အထဲနဲ့အပြင် လူနာနှင့် လူနာရှင် အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲ
နအဖ လက်ထက်တွင် ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားတိုင်း ပြည်ပအားကိုးပုစိန်ရိုးဆိုပြီး ပြည်ပ မှအတိုက်အခံ
မြန်မာပြည်သူများတွင် ပေါက်စရာဗုံးမပြောနဲ့ ကစားစရာဗုံးတောင်ကိုင်ခွင့် မပြုထားသော နအဖ
စစ်အုပ်စု များက သူတို့၏လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းများကို ပြုလုပ်ရာတွင်ပြည်သူများအနေဖြင့် အမြဲတမ်း စတေးခံရပါသည်.။ယခုလိုပေါက်ကွဲမှုမျိုးကိုလဲနအဖမှတမင်ဖန်းတီးထားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်.။
သတင်းထပ်မံရရှိပါက ဖော်ပြပေးပြီ ဓာတ်ပုံ များနှင်တ့ကွ တင်ပြပေးသွားပါမည်.။
အခင်းမဖြစ်ပွားမှီ အချိန်က ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်းရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ် ၏ မြင်ကွင်းပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်.။
ဤအပေါ်မှဓာတ်ပုံများအား ဘလော့ဂါညီလင်းဆက်ထံမှ ပြန်လည်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်.။
ပေါက်ကွဲမှုအပြီးတွင် နအဖ စစ်အစိုးရရဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲများပြာယာခတ်နေသောပုံရိပ်တချို့မြင်ကွင်း
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, April 15, 2010 Links to this post
နာဂစ်ဒေသ ရေရရှိရေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကူညီ
ပါတီကို ပြန်လည် မှတ်ပုံမတင်တော့တဲ့အတွက် ပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရပြီး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ မလုပ်နိုင်တော့ရင် လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေ ဆက်ပြီး လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသဘက်မှာ ရေသန့်ရရှိရေး အပါအ၀င် လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေကို အခုကတည်းက လုပ်ပေးနေပါတယ်။ အဖွဲချုပ် ရဲ့ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေအကြောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်က နာဂစ်ဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နွေရာသီအတွင်း ရေပြဿနာနဲ့ ကြုံခဲ့ရသလို ဒီနှစ်အတွက်လည်း သောက်ရေသန့် ပြဿနာနဲ့ ကြုံရနိုင်တာမို့ ရေရရှိရေး ကြိုးပမ်းကြဖို့ TCG အဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့လ အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပွန်ဂျာခေါ် နာဂစ်ဒေသ လေ့လာမှုတွေအရ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ရေကန်အားလုံးရဲ့ ၄၃% ဟာ ရေငန်ဝင်ပြီး သောက်သုံးဖို့ မသင့်လျော်တဲ့အပြင် မိုးရေသိုလှောင်တဲ့ ဓလေ့ကလည်း ပြတ်သလောက် ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကန်ရေကို အဓိက မှီခိုနေရတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ ၇၀% ကျော်ကျော်အတွက် ရေရှည်ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က နာဂစ်ဒေသ ကူညီရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး ရေတွင်း ရေကန်တွေ တူးဖော် သန့်စင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် အခု မကြာသေးခင်ကပဲ သောက်ရေသန့် ဖူလုံစေဖို့အတွက် တူးပေးနေတဲ့ ရေတွင်းတွေထဲက နောက်ထပ် ၂ တွင်းကို ဒေသခံတွေလက်ထဲ အပ်နှဲခဲ့တယ်လို့ ကူညီရေးအဖွဲ့က ဒေါက်တာ ဒေါ်မေ၀င်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
“ဘိုကလေးမြို့နယ် အထက်ဖူးညိုနဲ့ ကလီကြီးဆိုတဲ့ရွာမှာ သွားပြီး လှူခဲ့တာပါ။ အခုတူးနေတာက ဘိုကလေးမြို့နယ်ပဲ ကဒုံကနိဆိုတဲ့၊ သူကတော့ မြို့နီးပါးလောက် ကြီးပါတယ်။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ငွေအားနဲ့ နောက်တနေရာ၊ နှစ်နေရာမှာ တူးတယ်။ မော်ကျွန်းဘက်မှာလည်း အခု တူးနေတယ်။ ဟို၂ ခုကတော့ အပ်ပြီးသွားပြီ၊ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က။ တတွင်းကျတော့ နည်းနည်း သံဓာတ်ပါတယ်၊ နောက်တနေရာကျတော့ တတွင်းကို pH7 အတိုင်းပဲ ရပါတယ်။
“အခု ကဒုံကနိမှာ တူးတဲ့ တွင်းကတော့ ဟိုတလောတုန်းက ရေသန့် ထွက်ပြီးတော့မှ၊ ရေချိုထွက်ပြီးတော့မှ တွင်းပြိုသွားလို့ အခု ပြန်တူးနေရတယ်။ မော်ကျွန်းဘက်မှာ တူးတဲ့ တွင်းအခြေအနေကတော့ မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့။ ကျမတို့ဆီက ဦးအုန်းကြိုင်နဲ့ ဦးကြည်ဝင်းနဲ့ သွားကြပြီ။ ကျမတို့ နောက်ထပ် အသစ်တူးနေတဲ့တွင်းပေါ့၊ အဲဒီတွင်းတွေ အခြေအနေကို သူတို့ သွားကြည့်တာပါ။”
ဒီဒေသတွေမှာ ကန်ရေကို အဓိကထား သုံးကြပေမဲ့ ရာသီဥတု ပူပြင်းတဲ့အတွက် ခန်းပြီး ရေလုံလုံလောက်လောက် မရဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
“အဲဒီမှာ ကန်တွေတွေ့တယ်။ သူတို့က မိုးရေကို အဓိကထားပြီး လှောင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကန်တွေက ခန်းနေပြီ။ သုံးတဲ့လူက များပြီးတော့ ကန်ကသေးလို့။ ကန်တကန်ကတော့ အောက်ခြေမှာ ပက်ကြားအက်နေတယ်။ အဲဒီ ပက်ကြားအက်တဲ့ ကြားထဲက လက်ယက်တွင်းလို ပုံစံမျိုးနဲ့ အောက်ခြေမှာ လေးငါးနေရာလောက် တူးပြီး သုံးနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဆိုတော့ မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အဲဒီ ကဒုံကနိဆိုတာ၊ ပင်လယ်အ၀ဘက်မှာ။ ရေငန်တွေများပြီး ရေချိုမရှိတာ တွေ့ရတယ်။ အဲတော့ ဒီလို ကန်ရေနဲ့တော့ လောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရွာက လူဦးရေက တိုးတက်လာတယ်၊ ပြီးတော့ နွေကျတော့ ခန်းသွားတော့ စက်တွင်းပဲ ပိုသင့်တော်တယ်လို့ ကျမ ထင်တယ်။”
ကုလသမဂ္ဂ ယူနီဆက်ဖ်နဲ့ တခြားအဖွဲ့တွေက ဒေသတွင်းမှာ ရေကန်ပေါင်း ၃,၈၀၀ ကျော်နဲ့ စက်တွင်းပေါင်း ၃,၀၀၀ ကျော် တူးပေးခဲ့တယ်လို့ စာရင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက ဒီလို ကူညီမှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ နာဂစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဒေသတချို့မှာ အခုထိ သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှု မရှိသေးပါဘူး။ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ကတော့ ရေတွင်းတူးသလို တွဲလျက် ရေကန်တွေပါ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“တခြားသူတွေ လှူတာတော့ မသိဘူး၊ ကျမတို့ဆီက လှူတာတော့ စက်တွင်းတတွင်း တူးပြီးရင် ဘေးနားမှာ ရေကန်အကြီးကြီး၊ ဘေးနားမှာ လူတရပ်နီးပါးလောက် ရှိတဲ့ ကန်ပတ်လည်ပေါ့၊ အဲဒါကြီးကို တူးဖော်ပြီးမှ တခါတည်း ကန်ပါလှူလိုက်တာ ကျမတို့က။ သုံးတဲ့လူတွေကို တိုက်ရိုက်ပေးမခပ်ဘဲ ရေပိုသန့်အောင် စက်တွင်းထဲက ကန်ထဲကို တခါထည့်တယ်၊ ကန်ကမှ အောက်က ကော့ခ်လေးနဲ့ ထုတ်ပြီးတော့မှ ရွာသားတွေက ခပ်ကြတာပေါ့။ အဲတော့ ရေလည်း အလေအလွင့် မရှိဘူး၊ ပိုလည်း သန့်တာပေါ့။
“တခြားလူတွေ ပုံစံတော့ မသိဘူးပေါ့။ တခြားနေရာမှာ တခြား NGO တွေလည်း အများကြီး လှူနေတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ မြင်တာတော့ သူတို့ အခက်အခဲတွေ လာလာတင်ပြနေတာ ရှိတော့ သိပ်မလုံလောက်ဘူးလို့ပဲ သုံးသပ်လို့ ရပါတယ်။ ကမ်းနဖူးမဟုတ်ဘဲ ဟိုး အတွင်းဘက်တွေမှာတော့ အများကြီး ထပ်လုပ်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။”
နာဂစ်ဒေသ ကူညီရေးအဖွဲ့က ဒေါက်တာ ဒေါ်မေ၀င်းမြင့် ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် ရဲ့ ပိတောက်မြေမှ ခမောက်ဝေတဲ့လှုပ်ရှားမှု.....
သင်္ကြန်အကျနေ့က ရန်ကုန်က မဏ္ဍပ်တွေမှာ ပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးရဲဘော်များ လိုက်လံကပ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပိုစတာပါ..
ယနေ့ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်အကျနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ တို့မှ ရန်ကုန်မြို့နှင့် နယ်မြို့များမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပိုစတာကပ်ခြင်း၊ ခမောက်ဝေခြင်း၊ စီဒီအခွေများ ဖြန့်ဝေခြင်းများကို ပူပေါင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး တာဝန်ခံဆရာတော် အရှင်ဓမ္မရာဇာမှ ဆက်သွယ် ပြောကြားလာပါတယ်။
ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့.. သင်္ကြန်အကျနေ့မှာ မနက်၁၀နာရီခွဲလောက်က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော် ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ တို့ပူပေါင်းပြီး ခမောက်ဝေတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စီဒီအခွေဝေတာတွေကို ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေက မြို့နယ် ၁၅ခုလောက်မှာ တချိန်တည်း တပြိုင်တည်း အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်က မြို့နယ်တွေကတော့ ....
ရန်ကုန်တိုင်းမှာ. ရွှေပြည်သာ၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ လသာ၊ ကျောက်တံတား၊ ကြည့်မြင်တိုင်..
မန္တလေးတိုင်းမှာ.. မန္တလေးဈေးချိုနဲ့ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်...
မကွေးတိုင်းမှာ... မကွေးမြို့ပေါ်၊ ပခုက္ကူ၊ နတ်မောက်၊ ရေနံချောင်း၊ ချောက်....
ကရင်ပြည်နယ်မှာ... ဖားအံ၊ ကော့ကရိတ်....
ကချင်ပြည်နယ်မှာ... မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်....
ဧရာဝတီတိုင်းကတော့ ... ဘိုကလေးမြို့နယ်မှာ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။... အင်မတန်မှ အောင်မြင်ပြီး အားတက်စရာပါပဲ... အခုနယ်မြို့တွေနဲ့ စကားပြောပြီးပါပြီ... အားလုံးချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲ... အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြည်သူတွေအားလုံး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တသွေးတည်းတသားတည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြချင်လို့ လုပ်ဆောင်တာပါ.... ထူးခြားတာတွေကတော့ ပြည်သူတွေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ယူကြတာပါပဲ.... ကြည့်မြင်တိုင်မှာ ဝေတုန်းကတချို့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ မယူရဲတဲ့သူတွေ ရှိပေမယ့် အနားမှာရှိနေတဲ့ ဒါကာ၊ဒါကာမလေးတွေက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လာတောင်းယူကြတော့ ဘေးကသူတွေပါ တောင်းယူကြတယ်။ အားလုံးနိုင်ငံရေး စိတ်ဓာတ်နိုးကြားကုန်တယ်လေ..
မြို့ထဲမှာဝေတုန်းက ခမောက်ဝေနေတဲ့ အချိန်မှာ ရဲကားတစ်စီး ရောက်လာပြီးရပ်ကြည့်သေးတယ်.. နောက်ပြန်သွားတယ်..။ ဦးဇင်းတို့က သူတို့တွေကြားအောင် ဝေတဲ့အချိန်မှာ ပြညသူတွေ အရိပ်ရအောင် ဝေနေတာပါဆိုပြီး ခမောက်ကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ပြောပြီးဝေတယ်လေ..။ ခမောက်နဲ့အတူ စီဒီအခွေလည်း ဖြန့်ပါတယ်။ စီဒီက အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ကဒါကာတွေ လုပ်တာပါ.. ဘယ်ဟာမှန်တယ်... မှားတယ်ဆိုတာ သိရအောင်ရယ် နောက်အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ စီဒီထဲမှာ အကုန်ပါတယ်လေ။ နောက်မကွေးတိုင်း နတ်မောက်မှာ ခမောက်ဝေတာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအိမ်နားမှာပါ.. အခုပြတိုက်လုပ်ထားတဲ့ နေရာမှာပါ. အာဏာပိုင်တွေ တအံ့တသြနဲ့ လာကြည့်ပြီး နောက်ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်လို့ သိရတယ်။ တခြားဘာမှတော့ နှောင့်ယှက်တယ်လို့ မကြားရပါဘူး....
၄။...အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု အောင်ရမည်ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါတဲ့ ၂ပေပတ်လည် ပိုစတာတွေပါ.. အခုတစ်ရာကျော်ကို မနက် လေးနာရီလောက်ထဲက စပြီး ဦးဇင်းတို့ မဏ္ဍပ်ပေါင်း(၄၀)ကျော်မှာ လိုက်ကပ်ပါတယ်... ။
ဦးဇင်းတို့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း တစ်ချိန်တည်း တပြိုင်တည်းလုပ်တာပါ... နယ်သတင်းတွေ စောင့်နေရလို့ နောက်ကျသွားတာပါ.. ဦးဇင်းတို့ ခမောက်လှူတာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးပါဘူး အခုမှ စလုပ်တာပါ... ဦးဇင်းတို့လုပ်နေတာ ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေ အတွက်လုပ်နေတာပါ။ အဓိကကခမောက်ကို လှူဒါန်းရတာကတော့ ပြည်သူတွေ အားလုံးက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အတူရှိနေပြီး တသွေးတည်းတသားတည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြပြီး စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...။
ဦးဇင်းတို့ နအဖကိုဆက်ပြီး တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေမှာပါ။ ၂၀၀၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီး ဆန့်ကျင်လာတာပါ.. ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကို မပြင်သရွေ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို စိန်ခေါ်ပြီး ပြည်သူတွေဘက်က ဆက်လက်ရပ်တည်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော် ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး တာဝန်ခံဆရာတော် အရှင်ဓမ္မရာဇာမှပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒီနေ့နေ့လည် ရန်ကုန်မှာ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးချိန်မှာပဲ ဆက်သွယ်လာတာပါ.... နယ်မြို့အခြေအနေတွေ စောင့်နေရတဲ့အတွက် သတင်းနောက်ကျနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်...။ ရန်ကုန်မှာဝေတဲ့ ပိုစတာပုံကိုတော့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အခြားလက်ခံရရှိထားတဲ ဓာတ်ပုံများကိုတော့ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးဖော်ပြပါမည်။
Monks on the front line in Burma....
In this edition: hopes of democracy in Burma dashed as Aung San Suu Kyi is barred from taking part in elections - we bring youaspecial report on the monks still fighting for freedom...
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Thursday, April 15, 2010 Links to this post
သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ကြီးများသိန်းသုံးဆယ်စပေါ်တင်ရမည် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများ ဖောက်ဖျက်ပါက အာမခံငွေများအားလုံးသိမ်းဆည်သွားမည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, April 14, 2010 Links to this post
မြန်မာ့အတာသင်္ကြန် လည်ပတ် သူများ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် လျှော်ညီစွာ ၀တ်ရမည် ဟု စစ်အစိုးရကအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသော် လည်း မည်သည့် လူငယ်မှ လိုက်နာမှု မရှိ
တပ်မှုးတပ်သားပြောစကား အပိုင်း(၃) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရဦးတင်ဦး... ..
VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ အသံဖိုင်ပါ......
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Wednesday, April 14, 2010 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် ဌာနချုပ်၌ ယနေ့ ကျင်းပသော မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန် (ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း)။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, April 13, 2010 Links to this post
မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းထဲက ဝတ်စုံပြည့်အေးဓားပြများ(သို့) ခွေးစားတောင်းခံကြသူများ
သိပြီးသားအကြောင်းအရာတစ်ခုကို ထပ်ပြီးပြောပြနေရတာတွေ၊ လုပ်ပြနေရတာတွေဟာ တကယ်တော့ ကျုပ်စိတ်ကို မနှစ်မြို့စေတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့၊ ဒီထက်ပိုမို တိကျအောင် ပြောရရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်လာလို့ ပြောပြရပါဦးမယ်။ အများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားကို ကိစ္စတစ်ခုခုရှိလို့ ထွက်ကြရတဲ့ သာမန်အရပ်သူအရပ်သား ကိုရွှေမြန်မာတို့ကြုံဖူးဆုံဖူးကြပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း၊ ကိစ္စလေးတစ်ခုကို ပြောပြမလို့ပါ။ မထူးဆန်းတော့ပေမဲ့ ထပ်တလဲလဲကြုံနေ ကြားနေရတော့ အရုပ်ဆိုးလွန်း အကျည်းတန်လွန်းတယ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံစဉ်က ခံစားရသလို ကိုယ့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလည်း ကိုယ့်လိုပဲကြုံလာလို့ ပြောပြတဲ့အခါ အရင်ကရှိနှင့်ပြီးသား ခံစားချက်တွေဟာ ရေစီးကမ်းပြိုဖြစ်ပြီး အောင့်အီးမရ အံထွက်လာရပါတော့တယ်။
ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့နိုင်ငံခြားသွားပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဒီမနက်မှာပဲ အွန်လိုင်းမှာတွေ့လို့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်ဆေးရုံမှာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဆေးစစ်ဖို့ ထွက်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူစား၊ အတူသွား၊ နိုင်ငံခြားရောက်ပြန်တော့လည်း အချိန်အတန်ကြာသည်အထိ အတူနေမို့ ကိုယ်နဲ့ သူက အမွှာပူးလိုကို တွဲမိနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက အလွန့်အလွန်အလုပ်များရတဲ့အထဲ ကျမ်းမာရေးချူချာသူမို့၊ အထူးသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရတာကြောင့် ဆေးရုံဆေးခန်းတွေနဲ့ ဖက်လက်တကင်းနေပြီး အသက်ရှင်နေရသူရယ်ပါ။ အခုလည်း မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဆေးရုံအစုံ၊ ဆေးခန်းအကုန်သွားပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာ မသာတာကြောင့် ဘန်ကောက်ထွက်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်ထွက်မည့်မနက်၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ သူကြုံခဲ့ရတာကို ပြောပြမလို့ပါ။ သူနဲ့အတူ၊ သူ့အဒေါ်ရယ်၊ ညီမလေးရယ်၊ တူလေးရယ် စုစုပေါင်းလေးယောက် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ထဲ နိုင်ငံခြားယူဆောင်သွားမည့် ပစ္စည်းတွေ ဘာတွေကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကျ ၀န်ထမ်းတွေက စစ်ဆေးအခါ သူ့အဒေါ်အိပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးတွေ့လို့ ဆိုပြီး ရစ်ပါသတဲ့။ ရစ်တဲ့လူတွေ ဘယ်သူတွေလဲ လို့မေးကြည့်တော့ ရဲလေးယောက်လို့ သူငယ်ချင်းကပြောပါတယ်။ ရဲဆိုတာနဲ့ပဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ တော်တော်လေးကို အချဉ်ပေါက်နေပါပြီ။ ရစ်ပုံကတော့ အော့ကြောလံပါပဲ။
ဒီလောက်ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ဘာဖြစ်လို့ ယူသွားရတာလဲ၊ ဘယ်ကရတာလဲ စတဲ့ သူတို့နဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးပြီး ရစ်နေတာ။ သူငယ်ချင်းက ဆေးစစ်သွားမလို့ပါ လို့ပြောပေမဲ့ နားမ၀င်ပဲ ရစ်မြဲရစ်နေတာနဲ့ စိတ်ဆိုးပြီးတော့ “ဒီလိုဖြစ်တာ ခင်ဗျားတို့ သောက်သုံးမကျလို့ ဖြစ်ရတာ၊ ခင်ဗျားတို့ အသုံးကျရင် ကျုပ်တို့ သူများနိုင်ငံထွက်ပြီး တပင်တပန်းရှာထား၊ ဖွေထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ သွားအကုန်ခံနေစရာတောင်မလိုဘူး၊ အခုဒီလောက်ပိုက်ဆံတွေ ယူသွားတယ်ဆိုတာလည်း ဟိုမှာအခြေအနေက နာရီနဲ့အမျှ ပိုက်ဆံပေးပြီး ရက်ရှည်နေရမှာ၊ ဘယ်သူမှ ကျုပ်တို့လေးယောက်လုံးကို အလကားဆေးကုပေးမှာ မဟုတ်သလို၊ ဘယ်သူမှလည်း အိမ်ပေါ်အလကားတင်ကျွေးထားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အခုယူသွားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေက တကယ်ဆို နည်းတောင်နည်းသေးတယ်၊ ဘာမှဆက်မေးမနေနဲ့တော့” လို့ သူငယ်ချင်းက ပြောခဲ့ရတယ်။
အဲလိုလည်းပြောလိုက်ရော အဲဒီရစ်နေတဲ့ ရဲဝတ်နဲ့ ဒမြလေးကောင်ထဲက တစ်ကောင်က ဘာပြောလည်းဆိုတော့ “ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံတော့ ပေးခဲ့ကြပါဦး”လို့ ပြောပြန်ရောဗျား။ ဘယ်လောက်များ စက်ဆုတ်စရာ၊ ရှက်စရာကောင်းလဲ အရပ်ကတို့။ သူငယ်ချင်းကလည်း အေးရာအေးကြောင်းဖြစ်အောင် ဒေါ်လာ (၂၀) ထုတ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့အဖွဲ့ရဲ့ရှေ့က လူကိုလည်း အဲလိုပဲ ရစ်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေလို့ မြန်မာငွေငါးထောင်ထုတ်ပေးတော့ “ဒီပိုက်ဆံ နည်းနည်းလေးနဲ့ ဘာလုပ်လို့ ရမှာလဲ” လို့ ပြောသေးတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီမှာတာဝန်ကျတဲ့ ရဲတွေဟာ ဘာကောင်တွေတုန်းဗျား။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ သူတို့ကို ဒီနေရာမှာထားတာဟာ နိုင်ငံခြားထွက်မည့်လူတွေကို စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ငွေညှစ်ဖို့ ထားတယ်လို့များ တရားဝင်အောင့်မေ့နေလေရော့သလား။
ဒီလိုအကျင့်ပျက်၊ ချစားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ နိုင်ငံအနှံ့အပြားပါပဲ။ အားလုံးမကောင်းဘူးလို့ ၀ါးလုံးသိမ်းမပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဝတ်စစ်စားနဲ့လူတွေ၊ ရဲဝတ်ရဲစားနဲ့လူတွေကတော့ ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများကို ပျက်စီးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ သူတို့ကို ပြည်သူတွေက ကြောက်ရွံ့ကြတယ် လို့ အခြေခံအယူအဆရှိနေလို့လို့ ကျုပ်ကတော့ ပြောချင်တယ်။ ဒီလိုရှိအောင်လည်း ဆရာ့ဆရာကြီးတွေက လုပ်ခွင့်ပေးထား ပေတာကိုး။ အထက်အရာရှိအဆင့်ဆင့်တွေဟာ အောက်ကလူတွေ ဒီလိုလုပ်တာ သိကြပေမဲ့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလမ်းကြောင်းကို လျှောက်ခဲ့ရတာရယ်၊ အောက်ကလူတွေက ပြည်သူတွေဆီမှ တောင်းလို့တိုက်လို့လုလို့ရသမျှတွေထဲက နှုတ်ပိတ်ခကန်တော့တာတွေရယ်ကြောင့် မသိကျိုးကျွံပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မဖြစ်မနေအရေးယူရတဲ့ အဆင့်ရောက်လာတဲ့ ချစားမှုတွေ ရှိပေမဲ့ အဲဒါတွေကလည်း ဘယ်လိုမှကို ဖုံးလို့ဖိလို့မရလောက်အောင် လူထုနား ပေါက်ကြားသွားရတဲ့အမှုတွေက များပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလမှာရော၊ နောင်တစ်ချိန် တိုင်းပြည်ကံမကောင်းလို့ စစ်တပ်လက်ထဲ အာဏာရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာပါ (ဖွဟဲ့ လွဲပါစေ၊ ပယ်ပါစေဗျား) ဒီအကျည်းတန်ချစားတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီးဟာ ပျောက်ဖို့ လမ်းမရှိပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ ဒီမိုကရေစီဆိပ်သိုးခြင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်မှာ ကျုပ်နဲ့ အတူနေတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ရောက်စမှာ အိပ်နေရာလျှောက်ထားရေးတွေ ဘာတွေနဲ့ အလုပ်များပြီး ရုံးတွေဘာတွေ သွားရတဲ့အထိ ကြုံခဲ့ရတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလည်းမတတ်၊ စကားလည်းမပြောတတ်တော့ တရားရုံးမှာ ပြောဖို့ မြန်မာစကားပြန်ကောင်လေးတွေကို သက်ဆိုင်ရာက ရှာပေးထားတယ်။ အဲဒီကောင်လေးတွေ အကူအညီနဲ့ပဲ သူ့ကိစ္စတွေ အကုန်လုံးလောက်နီးပါး အေးအေးဆေးဆေးပြီးသွားတယ်။ အခုတော့ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမပေးရပဲ အစိုးရကချပေးထားတဲ့ အိပ်မှာ ဇိမ်ကျနေလေရဲ့။ ( ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် ရန်ကုန်က မိန်းမကိုခေါ်ထားတာ ရောက်မလာသေးလို့ အိပ်ယာထဲ ပုတီးပဲ လှိမ့်စိပ်နေရရှာတယ်၊ ရှလွတ်။) ပြောချင်တာက သူဇိမ်ကျ/မကျမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို အကူအညီအများကြီးပေးတဲ့ မြန်မာကောင်လေးတွေကို မြန်မာပီပီ ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ဆိုပြီး သူ့ရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို ထုတ်ပေးတော့ ကောင်လေးတွေက ဘာပြောမှတ်လဲ။ “မပေးပါနဲ့ အကိုရာ၊ ပေးဖို့မလိုပါဘူး၊ ကျနော်တို့အလုပ်က ဒီလို အမှုသည်တွေကို အကူအညီပေးဖို့ သက်သက်ပါပဲ၊ ဒီအတွက် သက်ဆိုင်ရာက ပြည့်စုံအောင် စီစဉ်ပေးထားပြီးသားပါ၊ အခုအကို့အတွက် အကူညီပေးလိုက်ရလို့ အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျနော့်အတွက်လည်း ဒီလုပ်ငန်းမှာဆက်ပြီး အလားအလာကောင်းဖို့ရှိပါတယ်၊ ဒီမှာတော့ ဘယ်ဝန်ထမ်းမှ ပေးဖို့မလိုပါဘူး၊ ဒီက ၀န်ထမ်းတွေကတော့ ကာစတမ်မာတွေကို ကူညီဖို့ သက်သက်ပါပဲ” တဲ့။ ကဲကြည့်စမ်း၊ ဘယ်လောက် ကွာခြားလဲ၊ ကျုပ်တို့ဆီကနဲ့။ အဲဒါဒီမိုကရေစီရဲ့ ပုံရိပ်ပေါ့ဗျာ့။
မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တာချင်း တူပေမဲ့ တစ်ယောက်က အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ထဲနေရလို့ စိတ်ဓာတ်တွေ အောက်တန်းနောက်တန်း ကျပြီး အတော့်ကို ကျက်သရေယုတ်တယ်။ တစ်ယောက်က ဒီမိုကရေစီဝါဒကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံထဲနေရလို့ စိတ်ဓာတ်တွေလဲ အလိုလိုကို အထက်တန်းကျသွားတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတွေမှန်သမျှ ဒီလိုချည်းပဲလို့တော့ ဆိုလိုလိမ့်မည် မထင်လိုက်နဲ့။ မကောင်းတဲ့လူတွေလည်း ရှိနေတာ တွေ့နေရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ သိပ်နည်းတယ်။ သိပ်နည်းဆို မရှိသလောက်ကို နည်းတာပါ။ ကျုပ် အင်္ဂလန်မှာနေတာ သုံးနှစ်ထဲရောက်ပြီ။ အဲလိုကိစ္စမျိုး တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသလို၊ ကြားလည်း မကြားဖူးဘူး။ ဒီလောက်မီဒီယာထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အဲလိုဟာမျိုးတစ်ခါလောက်တွေ့လိုက်လို့ကတော့ သတင်းစာတွေ၊ တီဗွီတွေက ပြောလို့ရေးလို့ကို ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီမှာက မီဒီယာကို အကြောက်ရဆုံးပဲ။ မီဒီယာကလွတ်လပ်တဲ့အတွက် ဘယ်ချစားမှုမျိုးကိုမဆို မညှာမတာ ဖေါ်ပြကြတယ်။ ဒီကရဲတွေလည်း မကောင်းအပြောခံရတာတွေ ရှိတော့ရှိတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ချစားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အပြောခံရတာမျိုး တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး။ သူတို့အပြောခံရတာက လမ်းပေါ် တ၀ီဝီနဲ့ အရေးပေါ်မီးဖွင့်ပြီး အတင်းမောင်းနေလို့ ကားသမားအချင်းချင်း အမြင်ကပ်တာပဲ ရှိတာ။ အဲဒါလည်း သူတို့ကိစ္စနဲ့ သူတို့ အလုပ်ရှိလို့ ပြေးလွှားနေရတာမို့ လူထုအများစုကတော့ ဘယ်သူမှ မကောင်းမမြင်ကြပါဘူး။ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်က ရဲတွေကတော့ဗျာ-----------------------သယ်----ပြောလိုက်ရ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူရေး ပျက်ကွက်မှုဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင်
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို မဲဆန္ဒရှင်တွေ ကိုယ်စား တရားစွဲဆိုမယ့် အစီအစဉ် တရပ်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ လွှတ်တော် မခေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မဲဆန္ဒရှင် လူထုကို တောင်းပန်အပြီး တဘက်မှာ အခုလို လွှတ်တော်ခေါ်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို နစ်နာမှုဆိုင်ရာနဲ့ တရားစွဲဆိုမှာ ဖြစ်တယ်လို့ NLD က ပြောဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ လွတ်တော်ခေါ်ယူရမယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး အတိအကျ ရှိထားပြီး ဒီအပေါ်မှာ လွှတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်သွားဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန္ဒသဘောထားလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဦးတင်ဦးက ဗွီအိုအေကို ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျနော်ရယ်၊ ဦးဝင်းတင်ရယ်၊ နောက် ကျနော်တို့ ဥပဒေ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့က လုပ်သက်ရင့်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ၂ ယောက်ပေါ့၊ ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲ့ ဦးကြည်ဝင်းနဲ့။ သဘောက ဒီလိုပါ၊ ပြည်သူလူထုကို ပန်ကြားလွှာ ထုတ်ပြီးပြီလေ။ ထုတ်တဲ့အထဲမှာ ကျနော်တို့ အတားအဆီး၊ အပိတ်အပင်တွေကြောင့် ပြည်သူတွေ အပေါ်မှာ မလုပ်နိုင်၊ မကိုင်နိုင်တဲ့ အပေါ်မှာ တောင်းပန်တဲ့သဘော၊ ကျနော်တို့ ရေးလိုက်တာက။
“ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပေးတဲ့ဟာက ကျနော်တို့ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဥပဒေက ရှိပြီးသား။ လွှတ်တော်ဥပဒေလည်း ရှိတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေလည်း ရှိတယ်။ ရွေးကောက်ခံရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ရေးထားတာက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ လွှတ်တော် ခေါ်ပေးရမည်။ ဆိုတော့ အဲဒီဟာ ရှိနေတယ်။ အဲဒီတော့ ခေါ်မပေးရင် ခေါ်မပေးတဲ့လူမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ကျနော်တို့က ခေါ်မယ် လုပ်ပြန်တော့ ဖမ်းဟယ်၊ ဆီးဟယ်၊ အချုပ်အနှောင်တွေ ဖြစ်တယ်။
“အဲတော့ ပြည်သူလူထုကို ဒီလို လုပ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်၊ Honor လုပ်မခံရတဲ့အတွက် သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်အထည် မဖော်နိုင်တာ ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် လူထုက နစ်နာတယ်။ အဲဒါကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အနေနဲ့လည်းပဲ တရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်ပြီးတော့ နစ်နာမှုအတွက် တရားစွဲမယ်ပေ့ါဗျာ။
“အလားတူပဲ ဆန္ဒရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူတွေကလည်း အလားတူပဲ သူတို့တင်မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟာ အမြဲတမ်း အနှောင့်အယှက်၊ အတားအဆီးတွေကြောင့် မလုပ်နိုင်တာကြောင့် သူတို့ နစ်နာပါတယ်ဆိုတာ ပြည်သူလူထု အပိုင်းက နေပြီးတော့ တရားဥပဒေနဲ့ အညီပေါ့ဗျာ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် သက်သာမှုရရန် အရေးဆိုနိုင်ခွင့် ဥပဒေ ရှိတယ်ပေ့ါ။ အဲဒါအတွက် ကျနော်တို့က လုပ်ကိုင်နေတဲ့သဘော ရှိတယ်။”
အဲဒါ တရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်တာလား။
“ဦးတိုက်လျှောက်တာ ဟုတ်ပါတယ်။ နစ်နာမှုအတွက် တရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်တာ။ ပထမတော့ ကျနော်တို့က နို့တစ်စ် (Notice) ပေးရမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့က ခက်တာက နို့တစ်စ် သွားပေးလို့ရှိရင်လည်း နို့တစ်စ် လက်ခံမယ့် အဲဒီ တရားရုံးချုပ်က ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်ပါဘူးတို့ ဘာတို့ ပြောတာရှိတယ်။ အဲဒါဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့က လက်မခံနိုင်ကြောင်းကို သေချာ မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လက်ခံရန် ပြောတယ်၊ လက်မခံတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်ပြီးတော့ လျှောက်နိုင်တဲ့ဟာရှိရင် ဆက်လျှောက်မယ်။ အဲဒီလိုပဲ သွားရမှာပဲ။”
အန်ကယ်တို့ ဥပဒေကြောင်း အရတော့ ဒါ ဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ သဘောလား။ အန်ကယ်တို့ စစ်ဆေးပြီးပြီလား။
“ဒါက ဥပဒေရှိပြီးသားပဲ။ Specific Relief Act က ရှိပြီးသားပဲ။ နစ်နာတဲ့သူက နစ်နာကြေးကို သက်ဆိုင်ရာက နစ်နာသူထံ နစ်နာတဲ့အတွက် ကုစားမှု တောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ ရှိတယ်လေ။ ငွေသားနစ်နာရင်လည်း ငွေဒဏ်ပေါ့ဗျာ။ တမျိုးတမည်နဲ့ ဘယ်လိုနစ်နာလဲ၊ နစ်နာပုံကို Divide လုပ်ပြီးတော့ တရားစွဲရတာပေါ့ဗျာ။”
“မျှော်လင့်တယ်ဆိုတာက ပြည်သူလူထုအတွက် ကျနော်တို့က လွှတ်တော်မှ မခေါ်နိုင်ဘဲ။ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းလည်း မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ ပြည်သူလူထုက သူတို့ဆန္ဒနဲ့ တင်ထားတာ မလုပ်ရတဲ့အတွက် သူတို့ဆန္ဒ မပြည့်ဝဘူးပေါ့။ အဲတော့ နစ်နာတာပေါ့။”
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး ရှင်းပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တရားစွဲဆိုခဲ့တာကို တရားရုံးက လက်မခံတဲ့အပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဘက်က တရားရုံးကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ကတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး တရားမမျှတတဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ် အတော်များများကို ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီမြေ ဒီရေ ဒီတိုင်းပြေ
တို့ ဗမာ နီရောင်သွေးတွေက
ခွပ်ဒေါင်းတွေ နီရောင်ပြောင်းကာ က
ကဒေါင်းတွေညင်သာနေလို့ အမိုက်မှောင်ဖုံးလေရော့သလား စာပိုဒ်ကတော့ အထူးစဉ်းစားစရာပါ...တို့ ဗမာ နီရောင်သွေးတွေက
ခွပ်ဒေါင်းတွေ နီရောင်ပြောင်းမှ ရပါတော့မယ်... ကဗျာရှင်အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်......
မြန်မာပြည်ကလွဲပြီး ဘယ်မှာမှ မရှိနိုင်တဲ့ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိ ကိုးရိုးကားရားနိုင်လှတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ... ကို ပြင်သစ်သတင်းထောက် Tristan Mendeက မြန်မာပြည်အတွင်း သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သတင်းမှတ်တမ်းရုပ်သံပါ။ ကားလမ်းတွေ ဘယ်ညာပြောင်းထားတဲ့ အတွက်ဒုက္ခရောက်ပုံ၊ တလဒေါ်လာ၃၀လောက်တာ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ GSM SIM CARD တစ်ခုကို ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ လိုက်မမှီတဲ့ ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ပေးရတာတွေ၊ Google နဲ့ Hotmail သုံးမရတာတွေ၊ ယခင်ဗေဒင်ကိန်း ဂဏန်းအရထုတ်ခဲ့တဲ့ ငွေစက္ကူတွေ.. ၊ဓာတ်ဆီရောင်းဝယ်မှု၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကို အစွန်အဖျားတွေပို့တာ၊ ကက်ဆက်ခွေနဲ့ သင်ယူရတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ E learning အဝေးသင် ပညာရေးစံနစ်၊ မြန်မာပြည်က ကချော်ကချက် ကလေးကစားကွင်း၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့ ခမ်းနားလှတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးပြတိုက်၊ မြို့တော်အသစ်ကို ၂လအတွင်း အြ့ပီးပြောင်းရွှေ့နိုင်ပုံ.. လူမရှိတဲ့ Golf Training Couse. လူမရှိပဲ တိရိစ္ဆာန်တွေသာရှိတဲ့ နေပြည်တော်(အမှားပြင်ဆင်ချက်.. နေပြည်တော်က တိရစ္ဆာန်ရုံ) အစရှိတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကမ္ဘာ့အံ့ဘွယ်များကို တင်ပြသွားပါတယ်။
နောက်ထပ် ကမ္ဘာ့ အံ့ဘွယ် ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ စက်မှုနိုင်ငံထူထောင်ပုံ...၊ သတင်းစာထဲမှ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အဝ ရနေပုံ. ၊ အချိန်လိုက် လျှပ်စစ်မီးပေးပုံ... ကလေးများကျောင်းမှာ အိမ်သာဆောက်လုပ်နေပုံကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများစစ်ဆေးနေပုံ၊ မည်သည့်နိုင်ငံမှမရှိတဲ့ ဥပဒေများ၊ အပြစ်မရှိသူတွေက အကျဉ်းချခံနေရပြီး အပြစ်ရှိသူတွေက တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်နေပုံ၊ ဦးခေါင်းမပါပဲ ၂၁နှစ်ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်နေပုံ၊ အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်လက် ရိုက်ကူးဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Monday, April 12, 2010 Links to this post
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်က နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၅ ဦး ထုတ်ပြန် စာအမှတ် ၇/ ၂၀၁၀ - နေ့စွဲ - ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၀
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (Citizen of Burma Award)
www.citizenofburma.org P.O Box 1276, Baldwin Park, CA 91706, U. S. A
Albany, Cincinnati, Washington D.C, Virginia, Maryland Metro Area, New York, Buffalo, Boston, Fort Wayne, Phoenix, Seattle, San Francisco and Los Angeles, Denver, Aurora, Greeley, Chapel Hill, Carrboro, High Point
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်က နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၅ ဦး ထုတ်ပြန်
၁။ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က စတင်ပြီး Citizen of Burma Award - ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အစီအစဉ်ကို ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူမှုလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်သူများအနက် မိမိတို့ ဆန္ဒပြုလိုသူကို အွန်လိုင်းနှင့် အီးမေးများမှ တဆင့် တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသော ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကလည်း မိမိတို့နေထိုင်ရာ မြို့ရွာဒေသအလိုက် ဆန္ဒသဘောထားများ လိုက်လံမေးမြန်းကောက်ခံခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြသည်။
၂။ မတ်လ ၂၄ မှ ဧပြီလ ၉ ရက်အတွင်း ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို လက်ခံခဲ့ရာ ယခု နောက်ဆုံးစာရင်းပိတ်ချိန်တွင် ပထမအဆင့် ဆန်ကာတင်အဖြစ် စုစုပေါင်း ၂၄ ဦးတွင် ဆရာတော် ၅ ဦး၊ အသင်းအဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့၊ အမျိုးသား ၆ ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ၃ ဦး ပါဝင်ပါသည်။
၁။ ကျော်သူ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း - ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပါ အထိခိုက်ခံပြီး ရန်ကုန် - နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်သူ၊ ထိုနာရေးကူညီမှုအသင်းနှင့်အတူ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးခန်း စသည့် ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆက်လက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူ၊ နိုင်ငံ၏ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသည့် အယူအဆ အလေ့အကျင့်များကို နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်း ၀တ္တရားများဆောင်ရွက်ရင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး ပြောင်းလဲမှုသို့ ဆွဲခေါ်သူ
၂။ ဇာဂနာ၊ လူရွှင်တော်၊ ဒါရိုက်တာ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်သူ - ၂၀၀၈ မေ - နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ပြည်သူများ၊ လူငယ်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်ကိုလည်း မီဒီယာများကတဆင့် အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရကို နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုသဖြင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသည်။ ထောင်ဒဏ် ၅၈ နှစ် ကျခံနေရသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလှူရှင်များ၊ လုပ်အားပေးစေတနာရှင်များနှင့် ပရိသတ်အားလုံးကို စည်းရုံးနိုင်သူ၊ အလုပ်ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်သူ၊ ရဲရင့်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုတင်ဆက်နိုင်သူ အနုပညာရှင်တဦးအဖြစ် ထူးခြားသည်။
၃။ သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ - နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် ဒုက္ခသည်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများပြီးလျင် တဦးချင်း အနေဖြင့် ငွေကြေး၊ အရင်းအနှီးအများဆုံးကို ပြည်သူလူထုထံက စနစ်တကျ အလှူခံကာ ဒုက္ခသည်များအား စနစ်ကျစွာဖြင့် ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော် တပါးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များကတည်းက ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းအခြေပြုပြီး သောက်သုံးရေ အလှူ၊ ဆေးကုသမှု ဒါနအလှူ နှင့် လူမှုလုပ်ငန်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်များကို အားပေး ထောက်ပံ့သူ၊ လှုံဆော်စည်းရုံးသူ၊ တည်ထောင်ဆောင်ရွက်သူတဦးအဖြစ် ထင်ရှားသည်။
၄။ ဖြူဖြူသင်း၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီဝင်၊ HIV လူနာများ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း - ၂၀၀၂ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လူငယ်အဖွဲ့သို့ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အတူ ကုလအစီအစဉ်ဖြင့် အေအိုင်ဒီအက်စ်- အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပညာရေးသင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် HIV လူနာများ၊ ကလေးသူငယ်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ဇောက်ချပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး အနှောက်အယှက်များကြားမှ ယနေ့ထက်ထိ အဆိုပါလုပ်ငန်းကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်သည်။ အခြားအင်န်ဂျီအိုလုပ်ငန်းအများအပြားရှိသည့်ကြားက ဖြူဖြူသင်းနှင့် မိတ်ဆွေများသည် လူနာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အခက်အခဲများကြားထဲက ရဲရင့်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စွန့်စားဆောင်ရွက်နေရသူ
၅။ ဦးအေးမြင့်၊ (ဦးအေးမြင့်မောင်) လမ်းပြကြယ်ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ - ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်းခံရသူ လယ်သမားများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် ရွာသားများအတွက် စစ်အာဏာပိုင်များနှင့် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သူ ရှေ့နေတဦး။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ( အိုင်အယ်လ်အို) ထံ စာရင်းများ၊ အချက်အလက်များ ပြုစုတိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် စစ်အစိုးရက ထောင်အကြိမ်ကြိမ်ချမှတ်ပြီး အရေးယူခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် အသက်မပြည့်ဘဲ စစ်မှုထမ်းရန် အဓမ္မခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံရသူ ကလေးစစ်သားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရှေ့နေလိုက်ခွင့်လိုင်စင်ကို စစ်အစိုးရက ရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုဘိုဘို (Los Angeles) အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, April 12, 2010 Links to this post
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်၏ ပထမအဆင့်ဆန်ကာတင်စာရင်း အမည် ၂၄ ခု ထုတ်ပြန်စာအမှတ် ၆/ ၂၀၁၀ - နေ့စွဲ - ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၀
Albany, Cincinnati, Washington D.C, Virginia, Maryland Metro Area, New York, Buffalo, Boston, Fort Wayne, Phoenix, Seattle, San Francisco and Los Angeles, Denver, Aurora,Greeley, Chapel Hill, Carrboro, High Point
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်၏ ပထမအဆင့်ဆန်ကာတင်စာရင်း အမည် ၂၄ ခု ထုတ်ပြန်
စာအမှတ် ၆/ ၂၀၁၀ - နေ့စွဲ - ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၀
၂။ မတ်လ ၂၄ မှ ဧပြီလ ၉ ရက်အတွင်း ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို လက်ခံခဲ့ရာ ယခု နောက်ဆုံးစာရင်းပိတ်ချိန်တွင် ပထမအဆင့် ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအမည်စာရင်းရှင်တို့၏ ထူးခြားမှုအကျဉ်းကိုလည်း ရရှိသော အချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်း တွဲဖက် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
၃။ ၎င်း တို့မှာ -
၁။ ကရုဏာလူမှုကူညီရေးအသင်း၊ မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် - ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နာရေးနှင့် လူနာစောင့်ရှောက်မှု စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော အသင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပြီး ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။
၂။ ကျော်သူ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း - ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပါ အထိခိုက်ခံပြီး ရန်ကုန် - နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်သူ၊ ထိုနာရေးကူညီမှုအသင်းနှင့်အတူ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးခန်း စသည့် ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆက်လက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူ၊ နိုင်ငံ၏ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသည့် အယူအဆ အလေ့အကျင့်များကို နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်း ၀တ္တရားများဆောင်ရွက်ရင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး ပြောင်းလဲမှုသို့ ဆွဲခေါ်သူ
၃။ ဒေါက်တာစောဝါးထူး၊ မော်လမြိုင်မြို့ အနာကြီးရောဂါပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆေးရုံ - အနာကြီးရောဂါသည်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ဆေးကုသမှုပေးသည့် ဆေးရုံအုပ် ဆရာဝန်ကြီးကို ဆန္ဒပြုတင်ပြထားပါသည်။ အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပြီး ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
၄။ ဇာဂနာ၊ လူရွှင်တော်၊ ဒါရိုက်တာ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်သူ - ၂၀၀၈ မေ - နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ပြည်သူများ၊ လူငယ်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်ကိုလည်း မီဒီယာများကတဆင့် အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရကို နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုသဖြင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသည်။ ထောင်ဒဏ် ၅၈ နှစ် ကျခံနေရသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလှူရှင်များ၊ လုပ်အားပေးစေတနာရှင်များနှင့် ပရိသတ်အားလုံးကို စည်းရုံးနိုင်သူ၊ အလုပ်ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်သူ၊ ရဲရင့်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုတင်ဆက်နိုင်သူ အနုပညာရှင်တဦးအဖြစ် ထူးခြားသည်။
၅။ ဦးဇေယျာပဏ္ဏိတ၊ မိုးညှင်းသိဂီကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ( ပိုင်းလော့ဆရာတော်)၊ တောင်ဒဂုံမြို့သစ် ၊ ရန်ကုန် - နာဂစ်မုန်တိုင်း အပြီး ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဒေးဒရဲအပိုင် ကျေးရွာများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ စားရေရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး၊ ဆေးဝါးကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဦးဆောင်ကူညီမှုများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ရွာသားများနှင့် ကလေးသူငယ်များကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဖြေသိမ့်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရုံသာမက ရွာသားများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကြံဆ ဆောင်ရွက်လာနိုင်အောင် စည်းရုံးဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၆။ သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ - နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် ဒုက္ခသည်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများပြီးလျင် တဦးချင်း အနေဖြင့် ငွေကြေး၊ အရင်းအနှီးအများဆုံးကို ပြည်သူလူထုထံက စနစ်တကျ အလှူခံကာ ဒုက္ခသည်များအား စနစ်ကျစွာဖြင့် ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော် တပါးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များကတည်းက ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းအခြေပြုပြီး သောက်သုံးရေ အလှူ၊ ဆေးကုသမှု ဒါနအလှူ နှင့် လူမှုလုပ်ငန်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်များကို အားပေး ထောက်ပံ့သူ၊ လှုံဆော်စည်းရုံးသူ၊ တည်ထောင်ဆောင်ရွက်သူတဦးအဖြစ် ထင်ရှားသည်။
၇။ ဦးနာယက၊ မန္တလေး - ဖောင်တော်ဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း - ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းကို ၁၀ စုနှစ် တခုကျော် ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်သူဖြစ်သည်။ အလှူရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စေတနာရှင်လုပ်အားပေးများဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအခြေပြု နေ့ကျောင်းနှင့် အဆောင်ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ဦးရေ ၅ ထောင်ကျော်ကို ပညာသင်ပေးနေသည်။ ပြည်နယ် အစွန်အဖျား အနှံ့က ကလေးသူငယ်များကိုလည်း စောင့်ရှောက်ပျိုးထောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းများမှတဆင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆက်နိုင်အောင်လည်း အားပေး ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သည်။
၈။ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ - နာရေးကူညီမှုအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဆရာကြီး ဦးသုခ၏ အိပ်မက်နှင့် မန္တလေးဗြဟ္မာစိုရ်အသင်းကြီး၏ လမ်းပြမှုမှ အကောင်အထည် ပေါ်လာသော 'ရန်ကုန်မြို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း' ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီတွင် လူတန်းစားမျိုးစုံ ပါဝင်သည်။ နာရေးလုပ်ငန်း၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ကယ်တင်ရေးလုပ်ငန်း၊ အခြား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် လူငယ်ဖြွုံဖိုးရေး စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ၂၀၀၈ နာဂစ်တွင် အသင်းကြီး၏ စေတနာဝန်ထမ်းအားလုံး မြန်မာပြည်သူ ရဟန်းသံဃာတို့နှင့်အတူ ကယ်ဆယ်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ နာရေး၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ အမြန်ဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
၉။ ဖြူဖြူသင်း၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီဝင်၊ HIV လူနာများ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း - ၂၀၀၂ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လူငယ်အဖွဲ့သို့ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အတူ ကုလအစီအစဉ်ဖြင့် အေအိုင်ဒီအက်စ်- အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပညာရေးသင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် HIV လူနာများ၊ ကလေးသူငယ်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ဇောက်ချပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး အနှောက်အယှက်များကြားမှ ယနေ့ထက်ထိ အဆိုပါလုပ်ငန်းကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်သည်။ အခြားအင်န်ဂျီအိုလုပ်ငန်းအများအပြားရှိသည့်ကြားက ဖြူဖြူသင်းနှင့် မိတ်ဆွေများသည် လူနာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အခက်အခဲများကြားထဲက ရဲရင့်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စွန့်စားဆောင်ရွက်နေရသူ
၁၀။ ဗြဟ္မစိုရ်အသင်း၊ မန္တလေးမြို့၊ နာရေးနှင့် လူမှုရေးကူညီမှုအသင်း - ဗြဟ္မာစိုရ်အသင်းကြီးသည် မန္တလေးမြို့၏ နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီး ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၈ မေ ၇ ရက်နေ့မှာ ဗြဟ္မစိုရ် လူမှု ကူညီရေး အသင်းကို မန္တလေးတွင် စတင် ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ တောင်စလင်း ဆရာတော် ဦးတိက္ခက ကျောင်းဝင်း အတွင်း ပေ နှစ်ရာ ပတ်လည် မြေကွက်ကို အသုံးပြုခွင့် ပေးသဖြင့် အသင်း၏ နေရာဌာန ဖြစ်လာသည်။ ဆရာတော် ဦးတိက္ခသည် ၎င်းအသင်းတွင် နာယက အဖြစ် တာဝန် ယူသည်။ နဒီ မြန်မာ ဦးအောင်ခိုင်၊ ဒေါ်ညိုမီ မိသားစုမှ နာရေးယာဉ် တစ်စီး လှူဒါန်းပြီး၊ နာရေး ကူညီမှု အပိုင်းမှာ အသားကျ လာသည့် အခါ ကျန်းမာရေး ကူညီမှု များကို ၂ဝဝဝ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှစပြီး ကူညီပေးခဲ့သည်။
၁၁။ မလွန်ဈေးဆန်လှူအသင်းကြီး၊ မန္တလေး - မြန်မာပြည်အတွင်း အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အလှူခံရရှိသော ဆွမ်းဆန်များကို နှစ်စဉ် တော်သလင်းလ၌ စစ်ကိုင်း၊ မင်းကွန်း၊ မင်းဝံ တောင်ရိုးကြီး သုံးရပ်နှင့် မန္တလေး လေးပြင်လေးရပ်မှာ သီတင်းသုံးကြသည့် ရဟန်း သာမဏေ၊ သူတော်၊ သီလရှင်များကို ပေးလှူသော အသင်းကြီး ဖြစ်သည်။ သီပေါမင်းတရား ပါတော်မူသည့်နှစ် (၁၈၈၅)ခုနှစ်အလွန် (၁၁)နှစ်အကြာမှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့ရှိ နှစ်ပေါင်း(၁၁၀)ကျော်ရှိပြီ ဖြစ်၍ ရှားရှားပါးပါး ပရဟိတအသင်းကြီး ဖြစ်သည်။ တစ်ပြည်လုံးတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း မလွန်ဆန်လှူ အသင်းထောက် (၇၀၀)ကျော်က ပရဟိတ စိတ်ရင်း အပြည့်နှင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးနေကြသည်။
၁၂။ မေရီချက်(ပ်)မင်း နားမကြားသောကလေးများ ကျောင်း။ Mary Chapman Teachers Training Callege & School for the Deaf။ ရန်ကုန် - မြန်မာနိုင်ငံရှိ နားမကြားသော ကလေးများအတွက် ပထမဆုံးကျောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၂၀-ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်သူ မစ္စ မေရီချက်(ပ်)မင်း (Miss Mary Chapman) က မြန်မာပြည်ရှိ မွေးရာပါ နားမကြား၊ စကားမပြောတတ်သော ကလေးသူငယ်များအတွက် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နားမကြားသော ကလေးငယ်များကို ပညာသင်ကြားပေးနိုင်မည့် ဆရာ၊ ဆရာမများကို ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပြီး နားမကြားသော ကလေးများကိုလည်း စာနှင့် သက်မွေးပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
၁၃။ မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ရွှေဇီးကွက်)၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း - မိမိ၏ မိသားစု၊ ခင်ပွန်းနှင့်အတူ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်သူ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စများတွင် ငွေကြေး၊ လုပ်အား၊ စွမ်းအင်များကို ထိရောက် မြန်ဆန်မှု ရှိအောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သော ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် အမျိုးသမီးတဦး
၁၄။ ဦးမြင့်အေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရန်ကုန် - အဓမ္မလုပ်အားပေးများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ကလေးစစ်သားများကို ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို နယ်များ၊ ကျေးလက်များအထိ ဆင်းပြီး ဆောင်ရွက်သူ။ ကော့မှူးမြို့နယ် အဓမ္မလုပ်အားပေးများဘက်က ရပ်တည် တရားစွဲဆိုအောင်နိုင်သူ စုစုနွေးအရေးတွင် အိုင်အယ်အိုထံ သတင်းပေးပို့ပြီး ၀ိုင်းဝန်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်။
၁၅။ မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါဆိုဇိုင်ယတီ၊ MBS (Myanmar Blogger Society) - အင်တာနက်နှင့် ကွန်ပျူတာအခြေစိုက် ပညာဒါနလုပ်ငန်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူမှုရေးလုပ်ငန်းနှင့် တကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုများကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့တခု ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ တွင် ပထမဦးဆုံး မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါများ ဆွေးနွေး ကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ မေ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလှူခံခြင်း၊ လုပ်အားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၀ အတွင်း ရန်ကုန် မြန်မာအိုင်စီတီပတ်ခ်က အခြေတည်ပြီးနောက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့များတွင် အခမဲ့နည်းပညာသင်တန်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းမှတဆင့် အီးဘွတ်များ၊ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အစုအဖွဲ့တခု ဖြစ်သည်။
၁၆။ မွတ်ဆလင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် - အထွေထွေရောဂါနှင့် မျက်စိကု ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံကိုလည်း ဆန္ဒပြုထားကြပါသည်။ ရန်ကုန် မတ်ွဆလင် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံကို ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း တာဝန်ယူကြည့်ကြပ်လျက် ရှိပြီး နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ၊ဆေးဝါးကုသမှုတို့ကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးလျက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
၁၇။ ရန်အောင်မြင် ဆွမ်းချက်နှင့် နာရေးကူညီမှု အသင်း၊ မိတ္ထိလာ - ၁၉၉၁ မိတ္ထိလာမီးကြီးအပြီး ၁၉၉၂ မှ စတင်ပြီး သံဃာတော်များကို ဆွမ်းချက်လောင်းလှူခြင်းနှင့် မြို့နယ်တွင်း မိသားစုများ၏ နာရေးကူညီမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ တွင် အသင်းကို မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ မိတ္ထိလာ လူအိုရုံအတွက်လည်း ဝေယျာဝစ္စများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သံဃာတော်အပါး ၁၂၀၀၏ နေ့စဉ် ဆွမ်း ကို လောင်းလှူလျက်ရှိုသည်။ မိတ္ထိလာမြို့ရှိ ပူအိုက်ခြောက်သွေ့သော သင်းချိုင်းမြေကို သစ်ပင်ဝါးပင်တို့ စိုက်ပျိုးပြီး သာယာစိမ်းစိုအောင်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ မိတ္ထိလာလူအိုရုံမှ လူကြီးသူမများကို နှစ်စဉ် မြန်မာပြည်ဘုရားဖူးခရီး စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။ အသင်းဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးအုန်းကျော်၊ အတွင်းရေးမှူးမှာ ဦးမြင့်သိန်း ဖြစ်သည်။
၁၈။ သုခရိပ်မြုံ - HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ ကလေးများဂေဟာ (ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း) - ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာ အုတ်မြစ်ချအခြေတည်ခဲ့ပြီး HIV ကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များကို လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးများပုံမှန်တိုက်ကျွေးကာ အလှည့်ကျဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့် ပြုစုပေးနေသလို ဝိသာခါ သီလရှင်ပညာဒါနကျောင်းရဲ့ သင်ရိုးများအတိုင်း ပညာသင်ကြားပေးရာ နေရာ။
၁၉။ ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ၊ မှော်ဘီမြို့၊ မင်္ဂလာကျောင်းတိုက် - ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း တရားပွဲများတွင် ယနေ့မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ဝေဖန်ထောက်ပြမှုများဖြင့် ထင်ရှားသူ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားပြ ဆရာတော်ဖြစ်သည်။ သုမင်္ဂလာအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းကို ထူထောင်ပြီး နာဂစ်ကူညီမှုလုပ်ငန်းများ၊ ပညာဒါနလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အထွေထွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်သူ ဖြစ်သည်။
၂၀။ သန်းမြင့်အောင် (စာရေးဆရာမ)၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း - စာရေးသားခြင်းအလုပ်ကို အချိန်ပြည့် မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့ဘဲ နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းနှင့်တကွ အခြား အားနည်းသူ ကလေးသူငယ်များ (HIV သင့်ကလေးသူငယ်များ) စောင့်ရှောက်ရေး၊ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရေး၊ စာပေလောက၊ အနုပညာလောက အသိုင်းအ၀ိုင်းများ၏ ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာရေး စသည့်လုပ်ငန်းများကို စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ။ ၎င်း၏ စာပေရေးသားမှုများတွင်လည်း မြန်မာပြည်၏ အထူးလိုအပ်မှုများ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသည့် လူမှုရေးဒုက္ခဘေးကို စာဖတ်သူများ စာနာစိတ်၊ သဒ္ဓါစိတ်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းစိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ အားထုတ်ရေးသားနိုင်သည့် စာရေးဆရာ
၂၁။ ဦးအာစိဏ္ဏ - တေဇာရာမ ဘုန်းတော်ကြီးသင် အလယ်တန်းကျောင်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း - ယခင်က လှိုင်မြို့နယ်(၁၅)ရပ်ကွက် အနောက်အုတ်ကျင်းတွင် တည်ရှိခဲ့သော ဘုန်းကြီးကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် သည်စက်ရုံပေါင်းများစွာတည်ရှိသော နေရာဒေသဖြစ်ပြီး ၄င်းစက်ရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ကြသော အခြေခံအလုပ်သမားလူတန်းစား မိသားစုများမှာ စက်ရုံနှင့်နီးသောရပ်ကွက်များတွင် အလွန်ဆင်းရဲစွာ နေထိုင်ကြပြီး သူတို့သားသမီးအများစုမှာ မူလတန်းပညာကိုပင် ပြီးဆုံးအောင် မသင်ကြားနိုင်ကြဘဲ အရွယ်ရောက်သည်နှင့်မိဘများနည်းတူ စက်ရုံများတွင်အလုပ်ဝင်ကြခြင်းသံသရာကို မနှစ်မြို့သော ဆရာတော်က နွမ်းပါးသူ ကလေးများအတွက် ဘုန်းတော်ကြီးသင် အခြေခံမူလတန်းကျောင်းကို ၁၉၆၄တွင်တည်ထောင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝများသို့ရောက်ရှိစေရန်ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သူ။
၂၂။ ဦးအေးမြင့်၊ (ဦးအေးမြင့်မောင်) လမ်းပြကြယ်ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ - ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်းခံရသူ လယ်သမားများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် ရွာသားများအတွက် စစ်အာဏာပိုင်များနှင့် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သူ ရှေ့နေတဦး။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ( အိုင်အယ်လ်အို) ထံ စာရင်းများ၊ အချက်အလက်များ ပြုစုတိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် စစ်အစိုးရက ထောင်အကြိမ်ကြိမ်ချမှတ်ပြီး အရေးယူခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် အသက်မပြည့်ဘဲ စစ်မှုထမ်းရန် အဓမ္မခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံရသူ ကလေးစစ်သားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရှေ့နေလိုက်ခွင့်လိုင်စင်ကို စစ်အစိုးရက ရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
၂၃။ လူမှုထူးချွန်ဆုရ ဦးအောင်မြင်စိုး - တသီးပုဂ္ဂလတဦးအဖြစ် သွေး နှင့်မျက်ကြည်လွှာလှူခြင်း၊ HIV,AIDS ဝေဒါနာရှင်များအား စောင့်ရှောက်ကူညီခြင်း၊ UNICEF နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကလေးသူငယ်များအား ကူညီပံပိုးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သူ တဦးဖြစ်သည်။ လက်ရှိအစိုးရထံမှ လူမှုထူးချွန်ဂုဏ်ထူးဆောင်အဆင့် ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ အဆင့်များ ပေးအပ်ချီးမြင့်ခြင်းခံရသည်။
၂၄။ ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးခင်မောင်ရှိန်၊ ဦးညီညီထွေး၊ ဦးရန်နိုင်အောင်(ခ)ဦးဖိုးဖြူနှင့် ဦးစောကျော်ကျော်မင်း - မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးအမှုလိုက်ရှေ့ နေများ - တရားမျှတမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများအတွက် မိမိတို့တတ်ကျွမ်းသည့်အတတ်ပညာဖြင့် အခမဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ကူကွယ်ရာမဲ့အမှုသည်များအတွက် အမှုလိုက်ကာကွယ် အကျိုးဆောင်ပေးကြသော၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော မြန်မာ့ရှေ့နေများ။ (၄င်းတို့အားလုံးမှာ ရှေ့နေလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံထားကြရသူများဖြစ်ပါသည်)
၄။ ဧပြီလ ၁၀ နှင့် ၁၁ ရက်တွင် မြို့နယ်များအလိုက် ဖြစ်မြောက်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အသီးသီးက ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအရှိဆုံး ၅ ဦးကို “နောက်ဆုံးဆန်ကာတင်အဖြစ်” ရွေးချယ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ဧပြီလ ၁၂ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၅ ဦးကို ပရိသတ်အားလုံးထံသို့ အသိပေးတင်ပြပြီး အင်တာနက်မဲပေးသည့် စနစ်ဖြင့် မဲဆန္ဒရယူပြီး ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အဖြစ်ဂုဏ်ပြုနိုင်ရန် ရွေးချယ်မည် ဖြစ်သည်။ ဧပြီလ ၂၄ တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနားကို အိမ်ရှင်အဖြစ် အယ်လ်အေမိသားစုများက ကျင်းပကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် မဲအများဆုံး ဆန္ဒပြုခံရသူကို ကြေငြာမည်။
တိုက်အို၊တိုက်ဆွေး ပြိုကျတွင် ပိတ်မိနေသူ သမီးငယ်အာ...
ရန်ကုန် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများ နှစ်ဆန်း နှစ်ရက်နေ့မှစ...
အဝေးပြေးမော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင် အစားအစာထဲ အိပ်ဆေးထည့်ေ...
ယနေ့တွင်မန္တလေးသင်္ကြန်အတက်နေ့ နံနက်ခင်းက မိုးသက်လေပြ...
ယနေ့ ရန်ကုန်ရေဝေးသုသာန် ၌(၁၉) လောင်းပြိုင်အသုဘကိုမ...
သွေးနီစွန်းသော သင်္ကြန်နေ့(၂၀၁၀) အတွက် ဆုတောင်းမေတ...
သင်္ကြန်တွင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရှာမည့်သူများ ...
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် လားရှိုးမြို့ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် စည်ကာ...
မြန်မာပြည်သူတွေကိုမမှန်သတင်းလွှင့်ပေးနေတဲ့ နအဖ စစ်အ...
ယနေ့နေ့လည်တွင် ကန်တော်ကြီးကန်ပါတ်လမ်း ရေကစားမဏ္ဍပ် တ...
နာဂစ်ဒေသ ရေရရှိရေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က...
မြန်မာပြည် ရဲ့ ပိတောက်မြေမှ ခမောက်ဝေတဲ့လှုပ်ရှားမှု...
မြန်မာ့အတာသင်္ကြန် လည်ပတ် သူများ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှ...
တပ်မှုးတပ်သားပြောစကား အပိုင်း(၃) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် ဌာနချုပ်၌ ယနေ့ ကျင...
မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းထဲက ဝတ်စုံပြည့်အေးဓားပြများ(သု...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်က နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၅...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်၏ ပထမအဆင့်ဆန်ကာတင်စာရ...
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော်တွင် “စစ်အာဏာရှင်၏ တရားမ...
ထိုင်းဆန္ဒပြပွဲ ရိုက်တာ သတင်းဌာန ၏ ဂျပန် သတင်းထောက်...
ဒီနေ့ည ထိုင်းဆန္ဒပြပွဲ ရဲ့ မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ...(...
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးမှာ မြန်မာပြည်သူတွေ ကျန်းမာရွှင်လန်...
ဟံသာဝတီ ဂျာနယ် .........(နှစ်သစ်ဆုမွန်လွှာ)
ကျပျောက်သွားသော သင်္ကြန်များ ..